Public Health in Myanmar: Discussion on Presumption of innocence
အခုချိန်မှာ မှတ်ချက် ၂၀၀ ကျော်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာအချို့ စည်းဘောင်လွတ်နေခြင်း
ပို့စ်ကို 24/11/09 က ဒေါက်တာရဲမွန် တင်ပြီးတဲ့နောက် ဘယ်သူမှ မှတ်ချက်မပေးခင် ကျွန်မဖတ်ပြီး ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ မှတ်ချက်တခု ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှတ်ချက် ပေးတဲ့အချိန်မှာ ဒေါက်တာရဲမွန် ညွှန်းထားတဲ့ လျှပ်တပြက်နဲ့ 11 ဂျာနယ်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ မူလသတင်းတွေကို ဖတ်ဖို့ အချိန်မရသေးတာနဲ့ ဒေါက်တာရဲမွန် ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာ အပေါ်မှာပဲ မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သတင်းနှစ်ပုဒ်ကို ဖတ်အပြီးမှာတော့ တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်အတွက် ကျွန်မမှတ်ချက်က ဘာမှ အလေးအနက် မရှိဖြစ်နေတာကို ကျွန်မသတိထားမိပါတယ်။ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ကွန်မက်တွေ အတော်များနေတာကို တွေ့ရပြီး ကျွန်မက Professional တယောက် မဟုတ်တဲ့အတွက် Professional တွေပဲ ဦးစားပေး ဆွေးနွေးသင့်တယ် ယူဆလို့ နောက်ပိုင်း ဆက်မဆွေးနွေးဖြစ်ပဲ မှတ်ချက်တွေ အားလုံးကိုပဲ ဖတ်ပြီး ဘေးကနေ လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ပေးတဲ့ မှတ်ချက်ကို ဒေါက်တာရဲမွန်နဲ့ သံတုတ်ဆိုသူ စာဖတ်သူ နှစ်ဦး ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ဦးရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေ အပါအ၀င် ဒီပို့စ်နဲ့ ဒီပို့စ်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပို့စ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ “အကယ်၍သာ” နဲ့ “ဘယ်သူတာဝန်ရှိလဲ” ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာနေဦးတင်တဲ့ ပို့စ်နှစ်ခုပါ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကျွန်မ သုံးသပ်မိပြီး ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်တယ်ထင်လို့ ဒီပို့စ်ကို တင်ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်ပြက်နဲ့ 11 သတင်းနှစ်ပုဒ်ကို နောက်မှ ဖတ်ဖြစ်ပြီး ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ မှတ်ချက်လာရေးသူ အတော်များများရဲ့ ခံစားမှုအတိုင်း ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ မိသားစုနေရာကနေ တကယ်ကို ယူကျုံးမရ ခံစားရပါတယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်ကို နှစ်ယောက် တုံ့ပြန်ခဲ့ရမှာ ဒေါက်တာရဲမွန်ရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Perioperative Procedure နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Clinical Practice Guideline ကို အခုမကြာသေးခင်ကမှ ဆွဲထားတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ဒါကို ဥပဒေပြုပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ သက်ဆိုင်ရာ Health Care Facilities တွေမှာ ဖြန့်ချီထားခြင်း ရှိမရှိ မသိရပါ။ အခုလတ်တလော ဖြန့်ချီထားပြီးပြီ ဆိုရင်တောင်မှ ယခင်က တောက်ရှောက် Guideline မရှိပဲနဲ့ ကျင့်သုံးလာမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီတော့ Guideline မရှိရင် ဆရာဝန်တွေက မိမိမှာ ရှိတဲ့ ရှိစုမဲ့စု Knowledge နဲ့ Skill ကိုပဲ အားကိုးပြီး အဆင်ပြေသလို ကြည့်လုပ်ရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်လို့ အမှားအယွင်းတွေ အများကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တခုက ကျွန်မက သတင်းလိုက်ရခက်လို့ သတင်းသမားက ရသလောက်ကိုပဲ ဖော်ပြတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ “ဒီလို ဖော်ပြရင် သတင်းဟာ မမျှတနိုင်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဒေါက်တာ ရဲမွန်က မှတ်ချက်မှာ ပြန်ဖြေထားပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒီသတင်းက သတင်းဆိုတဲ့ Fact သက်သက်ကို ပြောထားတာ မဟုတ်ပဲ သတင်းဝေဖန်ချက်၊ သတင်းသုံးသပ်ချက်လိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒါကို သတင်းသမားရဲ့ အမြင်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ သတင်းသမားက ဒီလို မြင်တာကို မှန်တယ်လို့ ကျွန်မ မသတ်မှတ်သလို သတင်းကို ဒီလို ဖေါ်ပြတာကိုလည်း စည်းလွတ်ဘောင်လွတ် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ကျွန်မ မသတ်မှတ်ဘူး။ Accident and Incident Report တွေ ထွက်လာပြီးမှ သတင်းရေးဖို့ ဘယ်သတင်းသမားကမှ စောင့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရသလောက် အချက်အလက်ကိုပဲ တင်ပြီး သုံးသပ်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းသမားက သူဒီလောက်ပဲ လိုက်လို့ရတားတာတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ Surgeon အပေါ်မှာ မြင်တဲ့ သူမြင်သလို ဝေဖန်သုံးသပ်ထားတယ်၊ မတရား စွပ်စွဲထားတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်မလက်ခံတယ်။
နောက်တယောက် ဖြစ်တဲ့ ကိုသံတုတ်ရဲ့ မှတ်ချက်မှာ လူနာက ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ဆီမှာပဲ ပုံအပ်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်မ ပြောတဲ့အချက်ကို "ငယ်နိုင်ဆိုတဲ့ ငနဲမက အရူးချီးပန်း လျှောက်ပြောတယ်" လို့ ကိုသံတုတ်က ဆိုတားပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောတာကို နားမလည်တာ (သို့) နားလည်မှု လွဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်လို့ Clinical Decision Making နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုသံတုတ်နဲ့ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ကျွန်မ နည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လူနာရဲ့ ရောဂါကို စမ်းသပ် Diagnosis လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်က လူနာကို အခြေအနေ အသေးစိတ် ရှင်းပြရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အစ်ိတ်အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်တဲ့ရောဂါဆိုရင် ပုံတွေဘာတွေဆွဲပြီးတောင် ရှင်းပြရပါတယ်။ ရှင်းပြပြီးရင် ကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှိသမျှ Options အကုန်လုံးနဲ့ ကုသရင် ရလာနိုင်တဲ့ အကျိုးရော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုပါ ရာခိုင်နှုန်းတွေနှင့် တွက်ပြရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကျတော့ ကျန်းမာရေးကို အစိုးရက တာဝန်မယူတော့ ငွေရေးကြေးရေးပါ ပါရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးကို ရှင်းပြပြီးလို့ လူနာက နားလည်ပြီဆိုမှ ဘယ် Option ကို ရွေးပြီး ကုမယ်ဆိုတာ လူနာက ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ လူနာမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ကုသမှုကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် ကုသရာမှာ မတရားဘူးထင်ရင် Complaint တက်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ ရှိရပါတယ်။ လူနာက အဲဒါကို နားလည်းလည်ပြီ လက်လည်း လက်ခံပြီဆိုမှ Consent Form မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး ကုသမှုကို ခံယူရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်ကလည်း ဒီလောက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြတာ မရှိသလို ဆုံးဖြတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ဆရာဝန်ဘာပဲမေးမေး “ဆရာရေ ဆရာ့ကိုပဲ အားကိုးပါတယ် ဆရာ့သဘောပါပဲ” ဆိုတာပဲ လူနာအတော်များများက ပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မမှတ်ချက်ထဲမှာ ဆိုလိုတဲ့ “ပုံအပ်တယ်” ဆိုတာ ဒါကိုအတိုချုပ်လုပ်ပြီး ပြောလိုက်လို့ ကိုသံတုတ် နားမလည် ဖြစ်သွားတယ် ထင်တယ်။ မရှင်းရင် ကျွန်မကို ထပ်မေးပါ ထပ်ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ အရူးချီးပန်းဆိုတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို အတိအကျ မသိပေမဲ့ အဲဒါ ကျွန်မက မကောင်းတာ တခုခုကို ပြောလိုက်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်မသိပါတယ်။ ခုနက ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင် ကျွန်မ ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို အရူးချီးပန်း စကားလို့ ဆက်ပြီး သတ်မှတ်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
နောက်တခုက ဒေါက်တာနေဦးတင်ထားတဲ့ အကယ်၍ တခြားနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဖြစ်ရင် ဘယ်လို အရေးယူမလဲဆိုတာကို ဥပမာပေးထားတဲ့ပို့စ်ကို နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာနေဦး ဥပမာပေးတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ အခုမြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာ နှစ်ခု လူနာသေသွားတာကလွဲလို့ ကျန်တာ ဘာမှမတူတဲ့အတွက် ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့၊ လုံလောက်တဲ့ ဥပမာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ သြစကြေးလျားက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုက UK နဲ့ သိပ်မကွာလို့လည်း ကျွန်မက ပြောနိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ ဟိုမှာဖြစ်သွားတာ လူနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆက်မပြတ် Team member အချင်းချင်း Case Review တွေ လုပ်တာ ဖေါ်ပြထားတယ်။ လူနာ အသက်ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့ Health Care Team က လျစ်လျူရှုလို့ ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပဲ ဂရုတစိုက် ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ပေးလျက်နဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက် ဘယ်ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းကိုမှ အရေးယူလို့ မရပါဘူး။ ဒေါက်တာနေဦးက အင်္ဂလန်မှာ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ရင် အင်္ဂလန်မှာ Health Care Law အတိအကျရှိပြီး မတူတဲ့ Care တွေ အားလုံးအတွက် Clinical Practice Guidelines တွေ ရှိတာ၊ ဆေးရုံတိုင်းမှာ Hospital Procedure Manual တွေ Ward တိုင်းမှာ ထားရှိတာ သိပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို အတိအကျ လိုက်နာပြီး လုပ်လျက်နဲ့ တိမ်းပါးချွတ်ချော်သွားတာဟာ တွက်ထားတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းထဲက ပါသွားတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီမှာကျတော့ ဒီလို စနစ်တကျ မကျင့်သုံးတဲ့အပြင် မူရင်းသတင်းမှာပါတဲ့ လူနာမိခင် အပြောအရ Post –operative Care မှာ Pain Management ကိုတောင် မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး မဟုတ်လား။ Pre-Operative မှာ မှားသွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှ Post-Operative ကာလမှာ ပြန် Diagnosis လုပ်ပြီး ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ကာ ပြန်ကုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ နေဦးပေးတဲ့ အင်္ဂလန်က ဥပမာနဲ့ အခုဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာမှာ ကျင့်သုံးပုံချင်း လုံးဝမတူတဲ့အတွက် အင်္ဂလန်မှာ ဒီလိုဖြစ်သွားတာ အရေးယူလို့ မရတဲ့အတွက် ဒီမှာလည်း အရေးယူဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ပုံစံမျိုး Perioperative Procedure ကို နားမလည်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကို Message ပေးသလို ဖြစ်နေလို့ ဆွေးနွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဖြစ်သွားတာဟာ ဂရုစိုက်မှု နည်းလို့ ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်တော်တဲ့ အရေးယူမှုတော့ လိုကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူတာဝန် ရှိလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Surgeon က မခွဲစိတ်ခင် ရောဂါကို Diagnosis တိတိကျကျ မလုပ်ပဲ ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်တာ မှန်ရင် Diagnosis လုပ်ရာမှာ လုံးဝ Evidence based Practice မရှိတဲ့အတွက် ဒါဟာ Professional Practice မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး Surgeon က ဘာ Evidence မှ မရှိပဲ Diagnosis လုပ်လိုက်တာကို Anaesthetist (ထုံဆေး၊မေ့ဆေးဆရာဝန်) က ဒီအတိုင်း ဘာအထောက်အထားမှ မရှိဘဲ လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက် Anaesthetist မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူနာက ခွဲစိတ်ပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ ဆုံးတော့ ခွဲစိတ်ရာမှာ အမှားအယွင်းရှိခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဒီလူနာဟာ သေဆုံးတဲ့ အချိန်မှာ Recovery Room မှာ မဟုတ်နိုင်တော့ပဲ ICU (သို့) Laparo-Cavity နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Ward ထဲမှာ ရောက်နေပြီ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Recovery Room မှ ထွက်ပြီးတာနဲ့ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်လို့ ပြီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Anaesthetist ရော Surgeon ပါ နှစ်ယောက်စလုံးက အဓိက တာဝန်ရှိသူ မဟုတ်တော့ပဲ Post-Operative Care မှာ တာဝန်ကျတဲ့ သူနာပြုနဲ့ ဆရာဝန်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ Post-Operative Complication ကို Assessment နှင့် Mangement လုပ်ဖို့ တာဝန်က Ward ထဲမှာ တာဝန်ကျနေသူတွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ Recovey Room နဲ့ ICU က လူနာကို Ward က လက်ခံရင် Vital Signs တွေ ပုံမှန် (သို့) ပုံမှန်နီးပါး ဖြစ်မှ လက်ခံလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုလက်ခံပြီးရင် အခု Case မှာ လူနာက ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အတွက် ပထမတနာရီမှာ ၁၀ -၁၅ မိနှစ်တကြိမ်၊ ဒုတိယ နာရီမှာ မိနှစ် ၂၀ ကနေ နာရီဝက်တကြိမ် နောက်ထပ် နာရီတွေမှာလည်း လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို Vital Signs နဲ့ Oxygen Saturation, Respiratory Assessment, Pain Assessment, Neuological Assessment တို့ကို အဆက်မပြတ် တိုင်းတာ စမ်းသပ်ခြင်း လုပ်နေရမှာ ဖြစ်ပြီး Pain Management ကိုလည်း နိုင်နိုင်နင်းနင်း လုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခြေအနေမကောင်းရင် Ward မှာ တာဝန်ကျတဲ့ သူနာပြုနဲ့ ဆရာဝန်က ကျန်တဲ့ Health Care Team member တွေကို အချိန်မှီ Forward လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု လူနာသေဆုံးသွားတဲ့ ပြဿနာမှာ အချိန်မှီ Forward မလုပ်ခဲ့တာ သေချာသလို သူ့မိခင်ရဲ့ ပြောစကားအရလည်း လူနာဟာ သေဆုံးတဲ့အထိ နာကျင်တဲ့ ဝေဒါနာကို ခံစားသွားရတယ်ဆိုတာ Pain Management တာဝန်ယူခြင်း လုံဝပျက်ကွက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ သေဆုံးတဲ့အတွက် တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်က Diagnosis မှားတဲ့သူ၊ Diagnosis မသေချာပဲ Elecytolyte balance and serum level ဘယ်လောက် ရှိလို့ ရှိမှန်းမသိပဲ မေ့ဆေးပေးတဲ့ Anaesthestist တွေက စခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ Post-Operative (ခွဲစ်ိတ်ပြီး) ကာလမှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ Assessment တွေ Management တွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မလုပ်ခဲ့တဲ့ Post-Operative Care ကိုတာဝန်ယူသူ သူနာပြုနဲ့ ဆရာဝန်မှာသာ အဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျွန်မ လေ့လာရတဲ့ Peri-operative Care Procedure အရ ကျွန်မ ဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်။ ဒီထက် ကျယ်ပြန့်တာကို ပြောရင် Peri-operative Care Team တခုလုံးနဲ့ ဆေးရုံတရုံလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီထက် မိုမိုကျယ်ပြန့်တာကို ဆက်တွေးရင် ကျန်းမာရေး စနစ်ကြီးတခုလုံး မကောင်းလို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်တွေကလည်း ဒီစနစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် Health Care etnic တွေ၊ Clinical Competency တွေ၊ Professional conduct တွေကို ငွေကြေးနဲ့ အလဲအလည် လုပ်လာရသလို လူနာရှင်တွေ ကလည်း ငွေကြေး လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ ရှာပြီး ကုတာတောင် Safty မရှိတဲ့ Service ကိုပဲ ရရှိတာ အားလုံးက ဒီစနစ်ရဲ့ သားကောင်တွေလည်းဖြစ် ဒီစနစ်ကို အားပေးနေသူတွေလည်း ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။
Labels: Medical negiligence
ကိုtintနဲ့ ကျနော်နဲ့ နံချပ်ကူ စိတ်ဝင်စားတာချင်း တော့ တူပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း အလုပ်သမားပေမဲ့ နည်းနည်းလေး အကောင်း မြင်နေလို့(စိတ်ကောင်းဝင်နေလို့)တနည်းအားဖြင့် ရမလားလို့ ပြောမိလေ၏ ပေါ့ခင်ဗျ။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ အတိအကျ မသိတော့လည်း စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရတာပေါ့ခင်ဗျာ။
မငယ်နိုင် ပြောတာတွေအများကြီးအနက် ကျန်းမာရေးစနစ်ကြီး ကို အမြင်ကပ်တဲ့ နေရာမှာ သဘောချင်း တူပါတယ်။ ဘယ်သူမှာ တာဝန်ရှိသလဲ ဆိုတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ငြင်းစရာအကွက် ကြီးပဲ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ တာဝန်ရှိသူများ ငြင်းပါစေပေါ့။ ငြင်းပြီးရင် တာဝန်ရှိသူများ ပြည်သူတွေ ကျေနပ်အောင် ရှင်းလင်း ပြောပြပါစေပေါ့။
please မငယ်နိုင် opperative တွေကို operative တွေ အဖြစ် ပြင်ပေးပါဦး။
နောက်တစ်ခု မငယ်နိုင် "အင်္ဂလန်က Case မှာ Health Care Team တခုလုံး စနစ်တကျ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အရေးယူလို့ မရဘူး ဆိုတာ ကျွန်မလက်ခံပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။" ဆိုတာ နည်းနည်းလေး ချော်နေပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းကြည့်လို့ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစကို ကွက်ပြီး အရေးယူလို့မရဘူးလို့ ပြောလို့မရပါ။
ကိုနေဦးပြထားတဲ့ လင့်ခ်တစ်ခုမှာ house officers နှစ်ယောက်ကို ခွဲထုတ်ပြီး အရေးယူပြသွားပါတယ်။
U Kyi Soe should take responsibility for this case bcoz he is team leader. Mx of post op period is critical for every surgical patient yet he did not show up. He may have good reasons but he must communicate with patient's family. bcoz he didn't, he broke doctor patient relationship. MOs and Junior doctors should not be blamed bcoz they do not have power in Mx. To sue Dr. U Kyi soe , they will needalawyer who specialised in medical negligence. In USA, there are many lawyers who specialised in medical negligence and they are very powerful in US congress. They rejected health reform proposals many times bcoz they are afraid of losing their income sources from suing doctors. I think SSC will not be affected in suing process, bcoz they didnot break any legal code apparently. I do not want to comment on journalist bcoz they did what they were supposed to do and their presentation may not suitadoctor's taste but they presentedagood story. We must give them credit for that.
စာလုံးပေါင်းတွေမှားနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ မှားနေတာကို အသိပေးခဲ့တဲ့ အမည်မဖေါ်လိုသူနဲ့ အတိအကျ ထောက်ပြပေးခဲ့တဲ့ Vrabo ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်က Case နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကယ်၍သာ မှာ ဒေါက်တာနေဦး တင်ထားတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာပဲ ကျွန်မ ဆွေးနွေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ညွှန်းထားတဲ့ Link မှာ ကျွန်မသွားမဖတ်ရသေးလို့ ကွာဟနေတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထောက်ပြပေးတဲ့ Vravo ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ရေးထားတာတွေက ကျွန်မသင်ကြားဖူးတဲ့ Peri-Operative Procedure အတိုင်း ပြောခဲ့တာ ဖြစ်လို့ သတင်းနှစ်ပုဒ်နဲ့ ကျန်းမာရေး စံနစ်အကြောင်းကလွဲရင် ကျန်တာတွေက အမြင်တွေ မဟုတ်ပဲ Fact တွေသာ ဖြစ်လို့ လက်ခံတယ်၊ လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားကို ပြောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Yemyat - မျှဝေပေးထာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ US မှာ ပြည်နယ် ၅၀ တောင် ရှိပြီး ကျန်းမာရေးစနစ်က ပြည်နယ်တခုနဲ့ တခုမတူတဲ့အတွက် ကျွန်မသိပ်မသိဘူး။ အခုတော့ ဖယ်ဒရယ် အစိုးရအဆင့်မှာ UK, Canada နဲ့ Australia တို့မှာလို Medicare System ကို မိတ်ဆက်ဝင်နေတယ် ဆိုတာပဲ သိရပါတယ်။
ရေးသားတင်ပြမှုမှာ oPPerative လိုစာလုံးပေါင်းအမှားတွေအပြင် Laparoscopic ward လို အသုံးအနှူံး အမှားတွေလဲရှိပါတယ်။ (အဲဒီစကားလုံးကို ဘာလို့သုံးမှန်းစဉ်းစားလို့ကိုမရပါ)။ ၁.”Diagnosis ကိုတိတိကျကျမလုပ်ပဲ ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်တာမှန်ရင် Diagnosis လုပ်ရာမှာ လုံးဝ Evidence base(d) practice မရှိတဲ့အတွက်”
၂.”Suegeon က ဘာ Evidence မှမရှိပဲ Diagnosis လုပ်တာကို လက်ခံပြီး မေ့ဆေးပေးတဲ့”
၃.”Recovery room ကထွက်တာနဲ့အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Anaesthetist ရော Surgeon ပါအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေမဟုတ်တော့ပဲ postoperative care ကိုတာဝန်ယူသူ သူနာပြုနဲ့ဆရာဝန်တွေမှာသာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်”
ဆိုတာတွေဟာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ရေးသားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ Appendicitis ကို Diagnose လုပ်ဖို့ History Physical & examination အပြင် ဘယ်လို Evidences တွေလိုပါသလဲ။ လေ့လာထားတဲ့ perioperative care procedures မှတဆင့်သင်ပြစေလိုပါတယ်။
( Appendicitis ကို ရောဂါအမည်တပ်ရာမှာ အသုံးအ၀င်ဆုံး ကိရိယာ လို့ဆို့ကတဲ့ Alvarado Score မှာတောင် CBC တခုပဲ ပါတယ်။ ဒါတောင် Modified Socore မှာမပါဘူး။)
ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေး၊ဆွဲရေးနေကြတဲ့ အင်တာနက်။ဘလော့ဂါခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်ရေးတာကိုလဲကြိုက်သလိုဆွဲတွေး၊ဆွဲရေးနိုင် ပါတယ်။
တကယ်တမ်း တရားမျှတမှုဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေကို public ကို ထုတ်ပြမှပဲ သိတော့မယ်။
ကိုရဲမြတ် ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေ သူတို့လုပ်သင့်တာ လုပ်တယ် ဆိုတာတော့ လက်မခံပါ။ အကယ်၍ ဆေးရုံနဲ့ ကာယကံရှင် ဆရာဝန်က ဝေဖန်ဖို့ ငြင်းခဲ့ရင်တောင်မှ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ ရေးတဲ့စာကို ဆရာဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ Specialist Opinion ယူသင့်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေက အပြင်လူတစ်ယောက် ဖတ်ရင် မှန်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆရာဝန်တွေ ဖတ်ရင် အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ စာကြောင်းတွေလည်း တွေ့ရလို့ပါ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို သတင်း ဖော်ပြရင် အနည်းဆုံး research တော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အင်တာနက် ခေတ်မှာ Patient side အတွက် ရောဂါအခြေအနေနဲ့ ကုသပုံတွေကို ရှင်းပြထားတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးမှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးက တာဝန်အများဆုံး ယူသင့်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်တဲ့ ဆေးရုံ နဲ့ ကျန်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမှာလည်း အထိုက်အလျောက် တာဝန်ရှိပါတယ်။ Line of information မှန်မှန်ကန်ကန်သွားရဲ့လား၊ Order ကို လိုက်နာရာမှာ မှားယွင်းမှု ရှိရဲ့လား၊ ဆေးရုံရဲ့ ပြည့်စုံမှုရော ရှိရဲ့လားလို့ သုံးသပ်ရမှာပါ။
Management ပျက်ကွက်မှုဆိုတာတော့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ တရားဝင် ထုတ်မပြန်သေးသရွေ့ တစ်ဖက်သတ် စွပ်စွဲချက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
စွပ်စွဲတဲ့သူမှာလည်း သံသယ ရဲ့ အကျိုး ရှိပါတယ်။ အခုတော့ တစ်ဖက်သတ်ကြီး စွပ်စွဲနေကြတာ ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကြားက နားလည်မှုဟာ အမုန်းတရားဖက် ရောက်နေတယ်လို့ ကျနော် မြင်တယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် စိတ်ပျက်စရာပဲလို့ ကျနော် ခံစားရတယ်။း အခု ဂျာနယ်တွေရော အင်တာနက်တွေမှာပါ ပြောဆိုရေးသားနေတာဟာ တစ်ဖက်သတ် အမြင်ဖြစ်ရုံသာမက ကိုယ်မြင်ရာ ရှုဒေါင့်ကနေ အပြစ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်နေကြတာက များပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီး မှားတယ်ပဲ ထားဦး၊ သူ အပြစ်ကျသွားလို့ရော ဒီလို ကိစ္စ ထပ်မဖြစ်ဘူး ဘယ်သူ အာမခံနိုင်သလဲ။ အခုဟာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ် မစဉ်းစားဘဲ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ လက်ညှိုးထိုးဖို့ လိုက်ရှာနေကြတာပါ။
Here new story!
ဒီဇင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၉
ဒေါ်ခင်မာကျော် (၅၉ နှစ်)၊ ဆာကူရာဆေးရုံ၊ ဒေါက်တာစောနောင်
ကိုကျော်ဇင် -စာလုံးပေါင်းမှားနေတာကို ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်း မှားတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ် ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Laparoscopic ward မှာ ဘာများ အသုံးအနှုံးမှားနေလဲ မသိဘူး။ အူအတက်က Abdominal Cavity မှာ ရှိပြီး အဲဒီနေရာမှ ရှိတဲ့ ကလီစာတွေကို ခွဲစိတ်ရင် Laparoscopic Surgery လို့ခေါ်ပြီး အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြီးလို့ လူနာကို Ward တွေရှိတဲ့နေရာကို ပို့ရင် နှလုံး၊ အဆုပ်၊ အသဲ ခွဲစိတ်တာမဟုတ်လို့ Cardio- Thoracic Ward ကိုပို့လို့မရဘူး၊ အရိုးတွေ ကြွက်သားတွေ ခွဲစိတ်တာ မဟုတ်လို့ Orthopaedic Ward ကိုပို့လို့မရဘူး။ ဦးနှောက်တွေ အာရုံကြောတွေ ခွဲစိတ်တာ မဟုတ်လို့ Neuro- Ward ကို ပို့လို့မရဘူး။ ၀မ်းပိုက်ကို ခွဲစိတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Laparoscopic Ward (သို့) GIT (Gastro-Intestinal Tract) Ward ကိုပဲ ပို့ရမယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကို အသုံးအနှုံးမှားနေတယ်လို့ ဘာကြောင့် ပြောတယ်ဆိုတာတောင် ကျွန်မ စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ကိုကျော်ဇင် မေးထားတဲ့ တခြားမေးခွန်းတွေအတွက် သီးသန့် ထပ်ဖြေမယ်။
ကိုကျော်ဇင် မေးခွန်း နံပါတ် ၁ နှင့် ၂ အတွက် အဖြေ
Appendicitis Diagnostic Study လုပ်ရင် Complete History နဲ့ Physical Examination အပါအ၀င် တချို့ Serum level တွေလည်း သိဖို့လိုပါတယ်။ သွေးဖြူဥ အရေအတွက် အထူးသဖြင့် Neutrophils အရေအတွက် အဆမတန် များနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ဟုတ်မဟုတ် CT scan (သို့) Ultrasound တခုခု နဲ့ အတည်ပြုဖို့ လိုရင်လည်းလိုနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ကြီးက အနှစ် ၃၀ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံနဲ့ ကလေးကလည်း ဒီရောဂါ ဖြစ်များတဲ့ ၁၀ ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်အနေအထားရလည်း ဒီလို တိတိကျကျ လုပ်နေစရာ မလိုအပ်ပဲ ရောဂါကို သတ်မှတ်နိုင်တယ်ပဲ ထားဦးတော့ သွေးမစစ်ပဲနဲ့ Anaesthetist သွေးထဲမှာ ဘာဘယ်လောက်ရှိလို့ ရှိမှန်းမသိ ဘယ်လို မေ့ဆေးပေးမလဲ။ Surgeon က ခွဲစိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်ဟာ ခွဲစိတ်နေတဲ့ ကာလမှာ လူနာရဲ့ အသက်ကို အဓိကကိုင်ထားသူ ဖြစ်လို့ သွေးထဲမှာ ဘာလယ်ဘယ် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မဖြစ်မနေ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Surgeon က လွယ်လွယ်ကူကူ Diagnosis လုပ်လိုက်တာရော Anaesthetist က ဒါတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ ခွဲစိတ်ဖို့ လက်ခံတာ နှစ်ခုစလုံးဟာ အထောက်အထား မခိုင်လုံပဲ ရမ်းလုပ်သလို ဖြစ်နေလို့ Evidence based Practice မရှိဘူးလို့ အတတ်ပြောလို့ ရပါတယ်။ Evidence based Practice ဆိုတာ ဆရာဝန်တွေမှမဟုတ်ဘူး Health Care Professional အားလုံး ကျင့်သုံးနေတဲ့ အမူအကျင့် တခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကျော်ဇင်ရဲ့ နံပါတ် ၃. မေးခွန်းအတွက် အဖြေ
-Recovery Room မှာ Vital Signs တွေ Stable မဖြစ်ပဲနဲ့ Ward တွေဆီ လွှဲပြောင်းပေးလို့ မရပါဘူး။ Ward တွေကို ပို့လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီလူနာကို ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားမှသာ ပို့လို့ရပါတယ်။ Peri-Operative Care ကို နားလည်တဲ့သူတွေ ဒါကို အကုန်လုံး သိပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကို ဘာမှ မသိပဲနဲ့ ကျွန်မက ဘလော့ဂါ့တယောက် အနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်သလို ဆွဲရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ဒေါက်တာ (သို့) ကိုကျော်ဇင်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောတဲ့ Procedure တွေက နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းအရ ပြောတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျမှု မရှိသေးရင်တောင်မှ အနည်းဆုံးတော့ Safety ရှိတဲ့အဆင့်တော့ လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
(1)I don't agree the surgery is successful if the patient is moved out from recovery room only. You can say it is if the patient becomes free of complications from the operation being done. In this case, you can imagine how difficult to treat the patient who has already had haemorrahgic vessels precipitated by unnecessary operation.
(3)No laparoscopic appendiectomy has been practiced so far in Ygn.
(3)I think you misunderstood evidence based practice or medicine. It doesnot mean the practice based on the clinical findings but is the research findings on the pratice.
laproscopic ဆိုတာ ဝမ်းဗိုက်ကို မှန်ပြောင်းနဲ့ ခွဲတာကို ဆိုလိုချင်တာလား မသိဘူး။ ရိုးရိုး ခွဲတာဆိုရင်တော့ general surgery ward ကိုပဲ ပို့ပါတယ်။ အဲ ဒီက အထူးကုဆေးရုံတွေက အဲလိုခွဲထားတာ မရှိပါဘူး။ အခန်းအကျယ်အဝန်းနဲ့ အထဲမှာပါတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပဲ ဈေးနှုန်းခွဲပါတယ်။
အူအတက်ရောင်တာကို Ultrasound က exclusion လုပ်တဲ့ အနေနဲ့ပဲ သုံးနိုင်သလို CT scan ကိုလည်း routinely သုံးတာ မကြားဘူး မဖတ်ဘူးပါ။
ကိုကျော်ဇင်ပြောထားတဲ့ အထဲမှာ CBC - complete Blood Count ပါပါတယ်။ အဲဒီမှာ parameters အလိုက် ဖော်ပြတဲ့ အမျိုးအစား အရေအတွက်တော့ ကွာတတ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ၁၄ မျိုး၊ ၂၂ မျိုး အသုံးများပါတယ်။ CP (coulter) ဆိုပြီး ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။
မေ့ဆေးကလည်း Infection screen, CP, BT, CT မရှိဘဲနဲ့တော့ OT ထဲ အဝင်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာနယ်ရဲ့ ဖော်ပြချက်ကို သက်သေအဖြစ် သုံးလို့ မရပါ။
vital signs stable ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်း ဆရာဝန် တစ်ယောက် မဟုတ်ဘဲနဲ့ သိနိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။ Stable ဖြစ်မှပဲ ပို့မှာပါ။ recovery room ကလည်း အခမဲ့ ထားတာမှ မဟုတ်တာ။
Evidence Based Medicine or Practice နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ mannyl ပြောသွားတာ သဘောတူပါတယ်။
Internet မှာ ရှာဖတ်ပြီး
အခုလို ၀င်ဆွေးနွေး ထောက်ပြတဲ့အတွက် Mannyl နှင့် Dr Koolstar ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မက Medical & Surgical ကို Sub-Major အဖြစ်၊ Peri-Operative Care ကို Specialised Area အဖြစ် ယူထားတဲ့ University of Technology, Sydney မှာ နောက်ဆုံးနှစ် Nursing Student တယောက်ပါ။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ ကျွန်မ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် June က စခဲ့ပြီး ကျွန်မ လုပ်ခဲ့တဲ့ Assignment တွေထဲက သာမန် ပြည်သူတွေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေကို ပြန်လည် ကောက်နှုတ်ပြီး ကျန်းမာရေး ပညာပေးပို့စ်တွေ စရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မက ကျောင်းသားတယောက် ဖြစ်တာနဲ့ညီ ကိုယ်သိတာကို မျှဝေလိုတဲ့ စေတနာ ရှိသလို အမှားထောက်ပြရင်လည်း ၀မ်းသာအားရ လက်ခံပါတယ်။ အခုကျွန်မရဲ့ ဒီပို့စ်မှာ လာဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာ Ye Myant နဲ့ Dr Koolstar ကိုတော့ ဒီဘလော့ဂ် မှာ စာရေးနေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းမို့ သိပေမဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်မ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို အခုလို ပြန်ဆွေးနွေးရတာ သြစကြေးလျားက ဆေးရုံတွေမှာ ဖြစ်သွားပြီးတဲ့ Case တွေကို ကျွန်မတို့ ကျောင်းက Online Forum မှာ Case Review အဖြစ် ပြန်ဆွေးနွေးရသလို ဆေးရုံတွေကို Clinical သွားရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ဖြစ်သွားတဲ့ Case တွေကို Health Care နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Medical , Nursing စတဲ့ အလုပ်သင်ကျောင်းသားတွေ စုပြီး ဆေးရုံရဲ့ Case Review Education Day လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့တွေမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ Case တွေရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို ၀ိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ အတိုင်းပဲ သဘောထားပြီး ဒီအတိုင်းပဲ ဆွေးနွေးပါတယ်။ ကွာတာက မြန်မာပြည်နဲ့ သြစကြေးလျားနဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပုံ စနစ် လုံးဝမတူတော့ Procedure တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွာဟနေတာ အများကြီး ရှိနေလို့ ထင်တယ်။
ရောဂါ Diagnosis လုပ်ရာမှာ ဆရာတို့ ခေါ်တဲ့ CBC, ကျွန်မတို့ဆီမှာ ခေါ်တဲ့ Full Blood Count (FBC) မှာ သေချာရင် CT, တို့ Ultrasound တို့က မလိုအပ်ဘူး ဟုတ်ပါတယ်။ နောက်တခုက ဒီမှာ ၀မ်းဗိုက်ခွဲစိတ်ရမဲ့ လူနာ အတော်များများကို သေချာအောင် Laparotomy လုပ်ပြီးမှ ခွဲစိတ်ရလို့ Laparostopic Theatre မှာ ခွဲစိတ်ပါတယ်။ General theatre ထဲကို က မတော်တဆ ထိခိုက်ပြီး ရောက်လာတဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ အသေးအမွှားတွေကိုပဲ ပို့ပါတယ်။ သိပ်ကြီးတဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ GITယ Uro တွေ Reproducitve စသည်ဖြင့် Ward တွေ ခွဲထားပေမဲ့ သိပ်မကြီးတဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ ၀မ်းဗိုက်ခွဲစိတ်ထားသူတွေကို အကုန်လုံး ရောထားတဲ့အတွက် Laparostopic အဖြစ် Ward တခုထည်းမှာ အတူတူ ထားပါတယ်။
Recovery Room က ထွက်ရင် ခွဲစိတ်မှု ပြီးမပြီး ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Recovey Room မှာ နှစ်နာရီကျော် Stable မဖြစ်လို့ Intensive Care (ICU) ကို သွားရရင်တော့ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ခြင်း မပြီးသေးပါဘူး ဆိုတာ လက်ခံတယ် ဒါပေမယ့် Ward တွေကို ပို့ရင်တော့ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်လိုက်ပြီးမှ ပို့လို့ ရပါတယ်။ Operating theatre ထဲက ထွက်ထွက်ခြင်း သိပ်အရေးကြီးတဲ့ Cardio-Thoracic လူနာတွေကို Recovery Room ကို မပို့ပဲ ICU (Intensive Care Unit) ကို ပို့ရပြီး တာကလွဲရင် ကျန်လူနာတွေကို Recovery Room ကိုပဲ ပို့ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဆီမှာ theatre ထဲက ထွက်ထွက်ချင်း ဘယ်ဆေးရုံမှာမှ သက်ဆိုင်ရာ Ward ထဲကို တန်းပို့ပိုင်ခွင့် မရှိသလို အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလို့ ယူဆလို့ Recovery Room က ပို့လာတဲ့ လူနာကိုတောင်မှ လက်ခံတဲ့ Ward က သူနာပြုကို အသေအချာ Handover ပေးရပြီး ဒီသူနာပြုက ဒီလူနာရဲ့ အခြေအနေက Ward ထဲမှာ ထားလောက်တဲ့ အဆင့်ထိ Stable မဖြစ်သေးဘူးထင်လို့ လက်မခံရင် ထားခဲ့လို့ မရဘူး လူနာကို Recovery Room ကို ပြန်ယူလာရတယ်။ Stable ဖြစ်မဖြစ်ကို ဆရာဝန်မှ သိတာမဟုတ်ပါဘူး သူနာပြုလည်း သိပါတယ်။ အရေးကြီးလို့ ICU ကို ပို့ရမည့် လူနာကလွဲရင် Operatig Theatre ထဲက ထွက်တဲ့ လူနာတိုင်း အပြင်လူနာဆိုရင် အိမ်မပြန်ခင်၊ အတွင်း လူနာဆိုရင် Ward ထဲကို မပို့ခင် Recovery Room ကို မဖြစ်မနေ ဖြတ်ရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တနာရီကနေ နှစ်နာရီအတွင်း Stable မဖြစ်ရင် ICU ကို ပို့ရပါတယ်။
Evidence Based Practice (EBP) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်-EBP တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အနက် ကျွန်မတို့ သင်ရတာ Evidence Based Medicine နဲ့ Evidence Based Nursing နှစ်ခုကိုပဲ သင်ရပါတယ်။ Evidence Based Medicine က မူလ Evidence ဖြစ်လို့ထင်တယ် Health Care Professional ဖြစ်ဖို့ ကျောင်းတက်နေသူ အကုန်သင်ရတယ်။ ဥပမာ Physiotherapist တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေက Evidence Based Medicine နဲ့ Evidence Based Physiotherapy ကို သင်ရတယ်လို့ သိရတယ်။ Health Care team member အချင်းချင်း တယောက်နဲ့တယောက် အလုပ်လုပ်ရာမှာ ဆက်စပ်နေလို့ တယောက်လုပ်တာကို တယောက်က Skill ကိုပဲ သင်စရာမလိုပေမဲ့ knowledge ကို သင်ရပါတယ်။ ဥပမာ ရောဂါ Diagnosis လုပ်တာဟာ ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်မို့ Physiotherapist တွေ Nurse တွေ လိုက်လုပ်စရာ မလိုပေမဲ့ ဘာလုပ်တယ် ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို သင်ရလို့ ဆရာဝန် အမှားလုပ်ရင် သိတယ် ထောက်ပြပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ လူနာတယောက်ကို ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကောင်းသွားလို့ Discharge လုပ်ရာမှာ ဒီလူနာဟာ အခုဆင်းသွားလို့ အိမ်ရောက်ရင် Safty မဖြစ်သေးဘူးလို့ Physio-Therapist (သို့) သူနာပြု စတဲ့ တခြား Health Care Professional ထဲက တယောက်ယေက်က ယူဆရင် ဆရာဝန်က သူ့သဘောနဲ့ သူ ပေးဆင်းလို့မရပါဘူး။ Team ဆိုတဲ့ စုပေါင်း ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Evidence Based Practice ဆိုတာ Health Care Professional တိုင်းအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တခြား Health Care Professional တွေ ဖြစ်တဲ့ Occupational therapist, Social Workers (Health Counsellor), Speech Pathologist, Dietician တွေလည်း သင်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မက လေ့လာနေဆဲ ကျောင်းသားတယောက် ဖြစ်လို့ တခြား Procedure တွေမှာ ရောရင် ရောနေနိုင်တယ်။ အဲဒါကို ထောက်ပြရင်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Evidence Based Practice နဲ့ပတ်သက်ပြီး Evidence Based Medicine နဲ့ ရောနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ Evidene Based Practie ကို Medicine တက်တဲ့ ဆရာဝန်တွေပဲ လိုအပ်တာ မဟုတ်ပါဘဲ ကျန်တဲ့ Health Care Professional တွေ အားလုံးလည်း လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို အကြောင်းပြန်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ပြီးပြည့်စုံတာ မရှိနိင်တဲ့အတွက် ထောက်ပြပေးတာကို တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ma Nge Naing >>> The words 'laproscopic' in your former comments & 'laprostopic' in your last comment are of different meanings. That's why there were misunderstanding among you & others, I think.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် PPA - ပြဿနာက အဲဒီစာလုံးပေါင်းမှားတဲ့ နေရာမှာပဲ အမြဲလာလာ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ ၀မ်းခေါင်းမြှေးနဲ့ ကာထားတဲ့ နေရာကို ခေါ်တာ Laparo-, အဲဒီထဲမှာ ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ သေချာအောင် Diagnosis လုပ်ဖို့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးကြည့်တာက Laparoscopy, အဲဒီ Cavity ထဲက အရာတွေကို ခွဲထုတ်ရတာက Laparotomy ဖြစ်တယ် (Harris, Nagy & Vardaxis, 2006,). ဒီတခါတော့ ကျွန်မ Dictionary ထဲကကို ကြည့်ပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်လို့ မှားတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်မ လောလောဆယ် Clinical ၀င်ပြီးသွားတဲ့ Operating theatre နဲ့ Ward တွေက Neuro နဲ့ Cardio-thoracic ပဲ အများဆုံးဖြစ်ပြီး Laparo-cavity နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ ရောပြီး မှားသွားတာ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။
Harris, P., Nagy, S., Vardaxis, N. (2006). Mosby’s dictionary of medicine, nursing & health professions. Marrickvill, NSW: Elsevier, Australia.
( Internet မှာ ရှာဖတ်ပြီး ဖြီးဖြန်းတာဖြီးဖြန်းပါစေ။
မှားနေပါတယ် ပြန်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောတာတောင်အရှက်မရှိပြန်မေးခွန်းတွေထုတ်နေတာ။အပြင်မှာဆိုငပေါကြီးအပြောခံရမှာမို့လို့ဒီထဲဝင်ပြီးလေကျယ်နေတာ။) လို့ မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့
ကို (သို့) မ Zenith- စာကို စိတ်ဝင်စားပြီး လာဖတ်တဲ့ အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှားတယ်ဆိုရင်လည်း ဘာမှားတယ် ဆိုတာကို တခြားသူတွေ ထောက်ပြသလို တိတိကျကျ ထောက်ပြလို့ ရပါတယ် ကျွန်မ စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး။ ဘာမှ အတွေ့အကြုံမရှိ Research တွေ မလုပ်ဖူး၊ လက်တွေ့တခါမှ မဆင်းဖူးပဲနဲ့ အင်တာနက်မှာ ရှာဖတ်ပြီး ကျွန်မအခု ရေးထားသလိုမျိုး ရေးလို့ ဖြစ်နိုင်မနိုင် ဆိုတာ သိရအောင် ကို/မ Zenith ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီး ဖြီးဖြန်းပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဖြေသိရလိမ့်မယ်။ ကို/မ Zenith ရဲ့ မှတ်ချက်က ကျွန်မအတွက် ဘာမှ မထိခိုက်သွားပေမဲ့ ကို/မ Zenith အတွက် အကုသိုလ်ကို ရစေပါတယ်။ တခြား စာလာဖတ်သူတွေအတွက်လည်း ဘာမှ အကျိုးမရှိသွားဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိတဲ့ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်သလိုလိုမျိုး ကျွန်မပို့စ်မှာ နောက်ထပ် လာရေးရင် ဖျက်မယ်လို့ အခုကတည်းက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မရေးတဲ့ စာအတွက် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရတာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်မက မဟုတ်တာတွေ လျှောက်ရေးနေတယ်လို့ ထင်ရင်တောင်မှ ဘယ်သူမဆို အမြင်ထပ်တူမကျနိုင်ဘူး ဆိုတာနဲ့ စိတ်ကိုဖြေပြီး သူများအကုသိုလ်ကို ကိုယ့်အကုသိုလ် မဖြစ်ဖို့အတွက် စိတ်နှလုံးသွင်းတတ်အောင် ကြိုးစားပါလို့ပဲ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
Eve Mon said...
မငယ်နိ်ုင် "laparoscopic" နဲ. အလုပ်များနေတာ တွေ.ရပါတယ်။ တကယ်တော. မငယ်နိုင် အမှတ်မှားနေတာပါ။ "၀မ်းခေါင်းမြှေးနဲ့ ကာထားတဲ့ နေရာကို ခေါ်တာ Laparo-" ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ but "အဲဒီထဲမှာ ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ သေချာအောင် Diagnosis လုပ်ဖို့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးကြည့်တာက Laparoscopy," ဆိုတာ အတိအကျ မမှန်ပါဘူး။ laparoscopy means "visualization of abdominal contents by means ofascope". ဗိုက်မှာ အပေါက်လေး ဖောက်ပြီး ဝမ်းတွင်း ကလီဇာကို မှန်ပြောင်းနဲ. ကြည်.တာကို laparoscopy လို.ခေါ်တာပါ။ laparoscopy may be diagnostic or therapeutic. laparoscopy လုပ်ပြီး appendix ကို ထုတ်ရင် laparoscopic appendectomy ပေါ.။ အဲလို မဟုတ်ဘဲ ဗိုက်ခွဲပြီး appendix ထုတ်ရင် laparotomy & appendectomy လို. ခေါ်ပါတယ်။
မငယ်နိ်ုင်က 'laparoscopic ward" လို. သုံးလိုက်တာဟာ " ဗိုက်ကို မှန်ပြောင်းနဲ. ကြည်.ပြီးသော လူနာများကို ထားသော ward" လို. ဆိုလိုသလို ဖြစ်သွားတာပါ။
ပြီးတော. myanmar မှာ laparoscopy သိပ်မလုပ်ပါဘူး။ (အစ်မရဲ. sydney မှာ တော. အလုပ်များနိ်ုင်ပါတယ်။) ဒါကြောင်. laparoscopic ward လို.သုံးတာကို complaint တက်ကြတာ နေမှာပါ၊
please find the definitions of laparoscopy & laparotomy in Wikipedia
Actually, medical terminology is the basic in learning medicine & essential to understand medicine.
An operation done by incision in abdomen is called " laparotomy " & such surgery is called " laparotomic surgery ".( not laparostopic )
An operation of abdomen throughahole by using laparoscope is called " laparoscopic surgery ".
evidence based medicine ဆိုတာ ဒီလိုပါ ။
ကိုယ်တို့ရှင်းပြရင်လဲ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဒီရောဂါဖြစ်ဘို့ရာနှုန်းများတယ်
ဒီလို ကုရင်တော့ ပျောက်ဘို့ရာနှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ် ။
ကောင်းတာကတော့ကွာ ခုဘာမှဆက်မပြောနဲ့ အုံး
တပတ်လောက် oncall general surgery registrar တယောက်ကို ခွင့်တောင်းပြီး ရှဲဒိုးလိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာ ။
Comment တွေတော်တော်များများကစေတနာပါတာတွေ့ရပါတယ်။ကျနော်တခုပြောချင်တာက အခုဖြစ်တဲ့ပြသနာတွေက ဆေးခန်းတခုရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းလို့၊ဆာဂျင်တယောက်ရဲ့ ဆုံဖြတ်ချက်မှားယွင်းလို့ဆိုတာထက် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရှုထောင့်ကနေပြန်ကြည့်ရင်နောက်ထပ်အမြင်တခု ထပ်ပေါ်လာဦးမှာပါ။ဂျာနယ်တွေမှာရေးကြတယ်ဆိုတာလည်း ပြန်လည်ပြောကြားသူရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတိုက်ရိုက်ရေးထားလို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအပေါ်သက်ယောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့်ဆိုလိုချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှာက်မှု ကိုမီးမောင်းထိုးပြတာပါပဲ။ဒါပေမယ့် ဒီဆိုက်ထဲကလိုဆေးလောကအကျွမ်းတ၀င် ရှိသူတွေကတောင် ပြသနာရဲ့ အပေါ်ယံ တရားခံကိုရှာကြ၊ကာကွယ်ကြဆိုတော့ ရေရှည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အဖြေက ကျနော်တို့အတွက်အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါပဲ။
ကွန့်မန့် တင်မရဘူးလို့ စီပုံးထဲမှာ ရေးထားတာ တွေ့လို့ ကွန့်မန့် တင်လို့ ရမရ စမ်းကြည့်တာပါ။
နောက်ထပ်လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ထားသွားတဲ့ သူတွေ အားလုံကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Zawminpaing- သတင်းပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Eva Mon and PPA- Medical Term တွေကို ပိုမိုရှင်းလင်းအောင် ထပ်ပြီး လာရှင်းပြသွားတာ ကျေးဇူးပဲနော့်။ ဝေါဟာရနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတာ အခုတော့ အစ်ကို/အစ်မတို့ ကျေးဇူးနဲ့ တော်တော်လေး ရှင်းသွားပါပြီ။
Nayminkhant- မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိကြပါတယ်။
ကိုTint- အလေးအနက်ထားပြီး လာဆွေးနွေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်မ ကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြတာက ကျွန်မက အင်တာနက်မှာ ရှာဖတ်ပြီး ဖြီးနေတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ တယောက် ရှိတာရယ် ပြီးတော့ မသိသေးတဲ့လူ အတော်များများက ဒီဘလော့ဂ်မှာ စာရေးတော့ ကျွန်မကို ဆရာဝန် ထင်နေမှာစိုးလို့ ပြောဖြစ်တာပါ။ ဒါနဲ့ ကိုတင့်တွေ့ရတဲ့ စကားရှည်ရင် မကြိုက်တဲ့ ဆရာကတော့ နည်းမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မတွေ့တဲ့ဆရာတွေ အားလုံးကတော့ များများပြောတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေချည်းပဲ။ ဖြီးလို့မရဘူး။
ကိုဂျူလိုင်- ကိုကျော်ဇင်က သူတယောက်ပဲ ၀င်လို့မရတာပါ၊ တခြားသူတွေ ၀င်လို့ရတယ်။ ကျွန်မက ဘလော့ဂ်ကနေ မှတ်ချက်ဝင်လို့မရအောင် ပိတ်ထားတယ် ထင်နေမှာစိုးလို့ Admin ထဲမှာမှာပါတဲ့ ကိုဂျူလိုင်ကို စာသွားဖတ်ရင်း ကြုံလို့ အကြောင်းကြားလိုက်တာပါ။
ကျွန်မထင်တာ သူ့ကွန်ပြူတာနဲ့ပဲ ဆိုင်မလားမသိဘူး။ လာစမ်းကြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲနော့်။
အဖြေနဲ့ဝေးနေမယ်ဆိုတာက လူတိုင်းဟာ အမှန်တရားကို လက်ခံရဲမှပါ .။
ကို အမှန်တရားနဲနဲလေးကို အရင်ပြောပြမယ်။
ခုပြောမှာက နဲနဲလေးနော် အစလေး
ခုခွဲစိတ်အကြောင်းပြောနေလို့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ဘဲ ဥပမာပေးပရစေ ။ ခုပြောနေတာဟာ ၁၉၉၃ ကနေ ၂၀၀၃ထိအခြေအနေနော် ။ ဗမာပြည် ရဲ့၂၀၀၃နောက်ပိုင်းကိုတော့ ကိုတယ်မသိတော့ဘူး ကိုနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီ
1993မှာ ယူကေ ကဆေးကျောင်းပြီးတဲ့သူတယောက်ကို ခု အရင်လိုက်ကြည့်မယ်နော် ။
ဟောက်စ်တနှစ်ဆင်း ( တလ ပေါင် ၁၅၀၀ လခ အသတင်ကျန် အခွန်နှုတ်ပြီး )
SHO ၂နှစ်လုပ်နေ ( တလ လခ ပေါင် ၁၈၀၀ကနေ ၂၀၀၀) (ဆရာကြီးများနဲ့ရင်အုပ်မကွာ )
တနှစ် research လုပ်( supervisor ရှိ )(လခက ၁၈၀၀ကိုပြန်ဆင်း ) MD ရ ။ မရတောင် ပေပါ ၂ခုလောက်တော့ ဂျာနယ်ထဲပါ )
Registrar rotation ၀င် ။ လခက ၂၃၀၀လောက်က စ
၅နှစ်လုံး ဆရာနဲ့ တွဲထား ။ တချက်မှ မလစ်ဟင်းစေရ ။
ဲ ၄နှစ်နဲ့၅နှစ် ကျတော့ ဆရာက လွှတ်ပြီ ။ ဆရာက ကော်ဖီသောက်နေ ။ သူ့ ကိုလွှတ်ပေး ။ ဆရာက ခက်တာတွေကျ ကိုယ်တိုင် လက်ထပ်သင်
( ဥပမာကွာ oesophagectomy လုပ်ပြီဆိုရင် ဆရာက ဆက်တဲ့နေရာလေး လာဝင်လုပ်ပြတာမျိုး )
၅နှစ်နားအနီးမှာ FRCS ( general surgery ) ဖြေ
( cardithoracic သမားကတော့ ၆နှစ်နားနီးမှ FRCS ( CT ) ဆိုပြီးဖြေရပါတယ် ။
အဲက ထွက်မှ consultant ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း Junior consultant ဆိုပြီး senior consultant တယောက်က ၂နှစ်လောက်ဖေးမပေးပါသေးတယ် ။
ကဲ အဲတော့ ၁၉၉၃အောင်ရင် စုစုပေါင်း ၁၁နှစ်တိတိ ဆရာနဲ့ရင်အုပ်မကွာ သင်တာခံရပါတယ် ။ ဒါက ပညာပိုင်း ။ ငွေကြေးပိုင်းကျတော့ ဟောက်စ်လခ ၁၅၀၀ဆိုတာ တော်တော်လေးလောက်ငပါတယ် ။ သင်တန်းလွှတ်ရင် ဆေးရုံက အကုန်ပေးပါတယ် ။ အိပ်ထဲက ၅ပြးတစေ့တောင်မကုန်ရပါ။
ကိုတို့ဗမာပြည် ၁၉၉၃ဆင်းရဲ့ဘ၀လေး ( လက်ကိုင်ပ၀ါဆောင်နော် ။ဒါတောင်အင်မတန် အဆင်ပြေတဲ့သူတွေအကြောင်းရေးမှာ )
ဟောက်စ်တနှစ်ဆင်း ( လခ ကျပ်သုံးဒင်္ဂါး ၁၂၀၀တိတိ ဘဲဥတလုံး ၁၂ကျပ်ခေတ်မှာ)
လာရော့ ပို့ စ်တင် ။ ကျပြီ AS သွားရော့ ဆင်ကလိန်ခန်းတီ ။ ဆရာဆိုတာ ကိုယ်ဘဲ ။ တပည့်ဆိုတာ လဲ ကိုယ်ဘဲ
၂နှစ်စေ့ ။ လာဖြေ M Med Sc ၀င်ခွင့် ။ ရပြီ ထား ။ တက်ဘို့ ဘာညာနဲ့ကုန်ရော့နောက်တနှစ်
လာခဲ့ရန်ကုန် မန်းတလေး
( ၄နှစ်ရှိပြီနော် အောင်တာ အဲထဲမှာ ဟောက်စ်ဆိုတာကလဲ တနေရာ ၃လဆိုတော့ ၀ဒ်ထဲနဲနဲလေးလည်ပြောင်းရတော့ တယ်မသင်နိုင် နောက် ၃နှစ်ကတော့ ငါကိုယ်တော်တကောင်ထဲ )
M Med Sc ၂နှစ်
ဒါကတော့ တကယ်အကျိုးရှိပါတယ် ။ (အဲ သို့ သော် ၁၉၉၃+၄ = ၂တလီ ၂ ။ ၂ ၂လီ ထက်ထက်မိုးဦး ဆိုတော့ နှစ်က ၁၉၉၇ဖြစ်ရော ) ။
သို့ သော် ရန်ကုန်မန်းလေးမှာ လခက ဘတ်စ်ကားခသာရှိတော့ ကျောင်းစရိတ်ကလဲကုန် ။ မိန်းမရပြီး မိဘဆီလဲ ပြန်မတောင်းချင်တော့ မိန်းမ ရှိတဲ့ ဟာလေးဘဲ နှိုက်နှိုက်သုံးရ
အဲတော့ ၁၉၉၉ကျ M Med Sc ပြီးရော ။ ပြီးတော့ င်္ပြီးတော့ specialist AS သွားရော့ လောက်ကိုင် သွားရော့ တွန်းဇံ ။ ငါကိုတော်တကောင်ထဲ ။
အဲတော့ FRCS က ပြောင်းတော့မယ် MRCS ကို
ဖြေလရော့ MRCS entrance
(ကိုပြောတယ်နော် ကိုရင် မျက်ရေမခိုင်မှာ စိုးလို့အဆင်ပြေတာရွေးပြောနေတာ )
လာခဲ့ ရန်ကုန် ။
အဲ ခုဏ ၂တစ်လီ မိုးဟေကို ဆိုတော့ ၂၀၀၀မှာ ရန်ကုန်ရောက်
တောင်တက်မြောက်တက် တက်။ ဟိုဝဒ်ဒီဝဒ်ဆင်း FRCS ပြန်တွေ လေရိုက်တာနာခံ ။ (တချို့ လဲ တကဲ့ စေတနာနဲ့တချို့ ကျတော့လဲ လက်ချာစတာ အဲတုန်းက ငါဆံပင်နဲ့ ကွနဲ့စပြီး အဲတုန်းက ငါဆံပင်နဲ့ ဆုံးသာသွား )
ATTACHMENT စောင့် ရ
၂တလီ အဲ ကိုသိတဲ့မင်းသမီးနာမည်တော့ကုန်ဘီ ။ ကို့ ဟာကိုသာ ဆက်တော့
ရောက်တော့ တခါ attachment ဆိုတော့ ခုန ကိုနဲ့ တူတူက 4th year registrar ဖြစ်နေလို့လည်လည်ကြီး လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကို ဘေးက ငေးကြည့် ။ ဟိုကြည့် ဒီကြည့် ၄လနေ ။
အောင်ပဟ (ပြောပြီးနော် ကိုရင် မျက်ရေမခိုင်မှာစိုးလို့)
အောင်တော့ဗမာပြည်ကို ပြန်လျှောက် ကျွန်တော် ဒီမှာ ခဏလောက်လေ့လာပရစေဆိုတော့ မရဘူးတဲ့ 
လေ့လာတာဘဲ ဗမာပြည်လေ့လာ တူတူဘဲတဲ့ဟဲ့ ဟဲ့ 
အဲနဲ့၂၀၀၂ အစ ဗမာပြည်ရောက် ။
သွားရော့ပုသိမ် တိုင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတဲ့ 
( အဆင်ပြေတာရွေးပြောတာနော် )
၂၀၀၃ သူများက exist exam ဖြေနေချိန်မှာ သူက မျောက်လောင်းမျောက်လောင်း
ကဲ သူ့ ၁၀နှစ်မှာ ဆရာနဲ့ရင်အုပ်မကွာ သင်ပေးတာ စုစုပေါင်း ၂နှစ် ။
အဲထဲမှာ အစိုးရ လခက စားလောက်မလောက် ကိုမသိဘူးနော်
ကိုသိတာတခုက ဖိုတိုကော်ပီဘိုး စာအုပ်ဘိုးတော့ မိန်းမဆီကတောင်းရတာကိုသိတယ် ။
အဖြေဟာ တကယ်ဘဲကွဲ့သေချာစွာပါဘဲ ရှိတယ်
ထိုးရင်းထိုးရင်း လက်ညှိုးက ကွေးကွေးပြီး ကိုယ့်နဖူးကိုယ် ပြန်စိုက်နေလေရောဗျို့။ သွားပြီး အမူးပဲ သောက်နေတော့မယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ စကားမပြောတော့ဘူး။
အချုပ်ကို ဆိုရလျှင် အသင် ဗမာပြည်သူ ပြည်သား တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသူ အပေါင်းတို့။ အသင်တို့လိုအပ်လျက်ရှိ သော ပမွှားသေးလှ ကိစ္စ အ၀၀အတွက် ထိုထိုသော ပြဿနာ ဗလ၀ အတွက်
ကုရာနတ္ထိ အကျွန်ုပ်တို့တွင် နည်းမရှိသည်တကား။ အသင်တို့သည် မိမိတို့ ကြမ္မာကို မိမိတို့ ဖန်တီးကြရကုန် လတ္တံ့။ စင်စစ်အားဖြင့် အသင်တို့၏ ရှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သေခြင်းသည် အတိတ်ဘ၀က ပြုသော သင်တို့၏ ကုသိုလ် အကုသိုလ်အတိုင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
လောက၌ ဆေးတည်းဟူသော အကြင်ပညာသည် ရှိ၏။ ယင်းဆေးပညာတည်းဟူသည်ကား စင်စစ် တတ်မြောက်ရန် မလွယ်ကူ။ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသော ပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်လေ၏။ ယင်းပညာကို သင်ရန် အထူးကြပ်မတ်မှုသည် လိုအပ်သည်။ အထူးမြင့်မားသော ဥာဏ်ရေ ဥာဏ်သွေးသည်လည်း လိုသည်။ အထူးစောင့်ရှောက်မှုသည် လိုအပ်၏။ (ယင်းပညာကို ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး စောင့်သည်။ ဤကား စကားချပ်။)
ယင်းကဲ့သို့သော အဖြစ်ကြောင့် အသင်တို့သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တကွသော ကျေးဇူးရှင် ဆေးပညာရှင်တို့က သင်တို့ ကွန်ပလိန့်တက်သမျှ လိုက်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ခြင်းအပေါ် အပြစ်တင်စောရန် မသင့်။ အသင်တို့သည် အသင်တို့၏ အတိတ်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကိုသာ နာနာကြီး အပြစ်တင်ဖို့သင့်သည်။
ယနေ့မှစ၍ သီလသမာဓိပညာကို ပွားများစေလျက် ဘာဝနာအလုပ်ကိုသာ များများသာ အားထုတ်ကြကုန်လော့။ မိမိ၏ ကျန်းမာရေး ကိစ္စအ၀၀သည် မိမိပေါ်တွင်သာ အပြည့်အ၀ မူတည်သည် တထစ်ချမှတ်။ အတ္ထာဟိ အတ္ထနော နာထောဟု ဘုရားဟောသည် မဟုတ်တုံလော။
အခုမှ အစလေးရှိသေးတယ်လေဗျာ ။
Blood bank ချင်း
ambulance ကားဆရာချင်း ( အမ် ဗမာပြည်မှာ ရှိလား ကိုယ်မသိ )
အဲလို အဲလို လေးတွေ ယှဉ်စရာလေးတွေ နောက်ထပ် နောက်ထပ် အများကြီး အများကြီး ....ကျန်ပါသေးတယ် ရှန်.......။
I'm starting to fall in love with your sense of humor Tint. We all know why 'ပေါက်ပင်ကိုင်းရတယ်'. If we(that includes the medical community) change ourselves, the positive way out is not far. It's just that very very few people try to makeadifference. Please don't make yourselves one of the general public with the attitude "I alone can't change things". If we start today, we may leaveamore pleasant community for our kids.
Bravo Bravo for your funny comment. Read my former comment please, that includes you too.
YY က တယ်ခက်တာဘဲ
ဆန္ဒတွေမစောကြနဲ့ လေ ။
ခုဟာက ပြောင်းဘို့လဲဘို့ က နောက် ယူဇနာ တရာလောက် လိုသေးတယ်
ခုက အမှန်တရားတွေကို ဘယ်လောက် ရင်ဆိုင်ရဲလဲဘဲ အမြည်းအစမ်းလေး ပေးတာ ။
ရုပ်ဝတ္ထုအခြေအနေမှန်တို့ ကို တချက်လေးမြီးစမ်းကြည့်ရုံလေးနဲ့ဘရာဗိုကြီး ပစ္စည်းမဲ့ ဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြီး မူးပြီးမှောက်သွားပြီ ။
ခု dialetical materialism ကြီးအရ (ရေးချင်တာက ဗမာလိုပါ . ။ ကို့ ကီးဘုတ်က တ ချို့ စာလုံးတွေရိုက်မရလို့) ရှေ့ ဆက်ပြီး အမှန်တရားတွေကို နားထောင်ရဲတဲ့ သူရှိသေးလားဆိုတာ ခဏလေးစောင့်ကြအုံး
နားထောင်ရဲရင် ရဲ ၃ရဲ မဟုတ်ဘဲ ဗိုက် ၃ဗိုက်ပုံပြင် ကိုဆက်ပြောမယ် ။
နားမထောင်ရဲတော့ရဲတော့ရင်တော့ ရှင်းရှင်းမင်းကိုပြောမယ် သွား.....တော့ ။
မငယ်နိုင် ကိုပြောချင်တာလေးတွေရှိသေးပေမယ့်၊ ဘာမှ အရေ့းကီးတာမပါပါဘူး။ခုအချိန်မှာအတော်ကလေးလဲခေတ်နောက်ကျတဲ့အကြောင်းအရော/အပ်ကေ့ာင်းထပ်တာမျိုးဖြစ်နေတာလဲပါပါတယ်။အဆင်ပြေရင်ပြောပါ့မယ်။
သြော် ကိုကျော်ဇင်က တကယ်မျက်ရည်လွယ်တာကိုးဗျာ
အမှန်ကို ရေးရဲတဲ့သတ္တိကျွန်တော့မှာမရှိသလို အမှန်ကို ဖတ်ရဲတဲ့သတ္တိလဲ ခင်ဗျားတို့ မှာ မရှိသေးပါဘူ
ခုဒါတွေချရေးပြမိတာလဲ ဗမာအထူးကုတွေဘာညာဆိုတာကို မခံနိုင်လို့။ ဗမာအထူးကုတွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတာ သိရုံလေးရေးပြတာပါ .။ စင်စစ်တော့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် စနစ်တခုထဲက လူတွေက ၁ကျပ်ရင်းပေးလို့ပြား၆၀လောက် ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တာ ။ ဗမာပြည် လက်ရှိလုပ်နေရရှာတဲ့ကျွန်တော့ အကိုတွေညီတွေခမျာက ၅ပြားဘိုးအရင်းနဲ့ပြား ၄၀ ပြား၅၀ဘိုး ပြန်ပေးဆပ်နေရရှာတာကို သိရင်ကျေနပ်ပါပြီဗျာ ။
ဒီလိုလုပ်ပါ။ ခင်ဗျား ဒီဘလော့ဂ်မှာ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့် ပမာကို အခန်းဆက်ပြီး တင်ပါ။ ကျုပ်တို့က တို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည် မလွဲပါကို မှတ်ချက်ထဲမှာ လာလာရေးပါ့မယ်။ (နောက်တာပါ။) ကြေညာထားတဲ့ သရီးအဗ္ဗဓိုမင်န် သို့တည်းမဟုတ် သရီးပရဂ္ဂနန္စီ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားလို့ ရေးရဲရင်ရေးကြည့်လို့ လာဆွခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပိုစ့်အောက်မှာ အားမနာလျှာမကျိုး ဆက်လေပေါနေရင် Matrix ထဲ မှာ အရိုက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ အရင်ဆုံး ခင်ဗျားခံရပါမယ်။ နောက် ကျုပ်ခံရပါမယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ် တစ်ယောက်မှ The One ဖြစ်ပုံ မရ။
ဒါနဲ့ ပြောရဦးမယ်ဗျ။ ကျုပ်ကလည်း ဗမာလို မရိုက်ရတာ ကြာတော့ ဗမာလို သိပ်ရိုက်ချင်ပါတယ်.. ဟဲဟဲ။ ကျုပ်တို့ နာဂတောင်တန်းက ညဘက် သိပ် အေးလွန်းတော့ ပေါပေါပဲပဲရတဲ့ ချက်အရက်ကို နှစ်စည်သုံးစည်လောက်တော့ ညစဉ်ညစဉ် မှီဝဲ ရသဗျာ။ ခွင့်လွှတ်ပါ ဘဒ္ဒီနဲ့ မဒ္ဒီများ။
(please ကိုတင့် အတည်ပြောမယ်။ အက်ဒမင် မင်းများ ညှိနှိုင်းလက်ခံရင် နည်းနည်း try လိုက်စမ်းပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ အာဝဇ္ဇန်းက Colin Wilson နဲ့ တူလွန်းလို့ပါ။ နောက်တာများ သွားရင်တော့ အားလုံးပဲ ဆောရီး)
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ် ... ပြင်ဆင်ဖို့လိုနေတယ် ဒါကို အားလုံးသိပြီးသားပဲ ဘာပဲပြောပြော မြန်မာလူမျိုးတွေက အထူးကုဆေးခန်းတွေကို နဲနဲတော့ လန့်သွားပြီ။ ဒါလဲ ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက် ကောင်းတာပဲ ။ သူတို့လဲ Load နဲနဲလျော့တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လို တောဆရာဝန်တွေကတော့ စကားများများ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာတော်တော်များများ နားလည်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာ စကားများများပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အငြင်းအခုံတွေကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တော့ အလုပ်ဖြစ်မဲ့ ကောက်ချက်ကို ရှာမတွေ့ဘူး။ တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာ လိုအပ်နေတာတွေကို ခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူး။ သူငယ်တန်းကလေးတယောက်ရဲ့အပြစ်ကို ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေနားသွားနေပြီး ဝေဖန်ရင် အကျိုးမရှိနူိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံအတွက် ခင်ဗျားတို့လုပ်ပေးနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ပျက်စရာ အငြင်းအခုံတွေကလွဲရင်ပေါ့။ အားလုံးက လူတော်တွေချည်းပါပဲ......
ကိုယ့်ဆီကအခြေအနေကိုသိပေမယ့်၊သူများဆီက train လုပ်ပုံကို ကိုတင့်ပြောပြသလောက်သေးစိတ်မသိဘူး။
တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာ လိုအပ်နေတာတွေကို ခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူး။ tawkyeegan
ကိုယ်သိထားတာပြောရ၇င် စနစ်တူတဲ့နိုင်င့ ၂ခုရယ်လို့မတွေ့ ဘူးသေးဘူး ။ နိုင်ငံတိုင်း သူ့ ဝိသေသနဲ့ သူဘဲ . ။ ခုနေခါမှာ ငါတို့ ဗမာပြည်မှာ လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်သလို သိနေတဲ့ဆရာကြီး ၃ယောက်လောက်ကို ၆လလောက် ယူအက်စ် ။ ယူကေ ၊ အော်ဇီ။ ယူရုပ် ၊ တရုပ်နဲ့Parkistan ကို လေ့လာရေးသွားစေပြီး ကိုတို့ ဗမာပြည် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ပေပါကြီးတစောင်ရေးပြီး
ကိုတင့်တို့ ကိုဘရာဗိုတို့ရေ.. မက်ဒီကယ်ကလူတွေ သီးသီးသန့်သန့် ရင်ဖွင့်လို့ရမယ့် ဖိုရမ် သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ်ကလေးတစ်ခုလောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်ဗျာ..
So far, no one has come up with "there must have been something wrong with us(the medical community) for not being able to adjust the system we are in to offer better service" attitude. I realized that most of you here have this "elitist" attitude and have really unreasonably high self-regards. Some of you just think of the difficulties you have gone through-all the years and all the money and all the service in remote corners of the country- but not the possibilities you could contribute to. One even stated "only if we had an exclusive blog for medical community", thinking of keeping the general public in the dark. Why did you get the medical degree in the first place? What were your aspirations? Were they money, money and money? I really hate to makeacomment like this. I'm discouraged by no prospect of reform willing doctors in the medical community. Hey, everyone in our doomed country has difficulties. Ideally, money doesn't come first in your profession. Maybe if some of you stop complaining about the system and start dedicating yourselves to what you are supposed to do(obviously not 200 patients an hour), the health care(if not the whole system) might bealot better. Thank you very much!
့YY ကတော့ ဒုတိယဖါးရွှေကျော်တိုက်ပွဲကို ထပ်တိုက်ချင်ပြန်ပြီထင်တယ် ။ ခဏလေးစောင့်ပါဆရာရယ် ။
အဲ ဒုတိယဖါးရွှေကျော်ကို မသိပြန်ဘူးလား ။
ဆရာလေးအတွက် ပုံပြင် တပုဒ်ထပ်ရေးပေးမှထင်တယ် ။
ဗမာ့သမိုင်းထဲက သိသင့်တယ်ထင်တဲ့အကွက်လေး ၃ကွက် ရေးပေးမယ် ။ ( အက်ဒမင်ဆရာတို့ ရေ ဆေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ တော့ ဖြတ်မပစ်ပါနဲ့ ဗျာ ။ ဆုံးအောင်ဖတ်ရင် ဆေးနဲ့ဆိုင်လာတာတွေ့ မှာပါ )
အဲလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူးကိုတင်.ရာ.... စိတ်ထဲမှာ မချင်.ရဲရတဲ. အကြောင်းတွေများနေလို.ပါ.. ဖြေဆေးရတဲ.အထိထိုင်စောင်.နေရင် မြွေပါလဲဆုံး သားလဲဆုံးဖြစ်မှာစိုးလို.ပါ.. ကျွန်တော်.အဖေ နဲ. ကျွန်တော် မရခဲ.တဲ. (ရသင်.တဲ.)အခွင်.အရေးတွေ ကျွန်တော်.ကလေးတွေတော. ထပ်မဆုံးရှုံးစေချင်တော.ဘူး .. ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲချင်စိတ်ရှိသူတွေ များလာရင်တော. အပေါင်းလက်ခနာ(သီးခံပါ) ဆောင်လာမယ်လို.ယုံကြည်ချင်လို.ပါ... ရန်လိုတာ မဟုတ်ရပါဘူး..
တိုက်ပွဲံလို့ ပြောလိုက်လို့ရန်လိုတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ
တခုတော့ ရှိတယ် ။ ကျွန်တော့ ငယ်ငယ်ထဲက သူများကို ဘာလုပ်လို့ပြောတတ်တဲ့အကျင့်တော့မရှိဘူး
သဘောတရားဘဲပြောပြတတ်တယ် ။ ခု ပြောပြမှာတွေက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ
ဖါးရွှေကျော်ဆိုတာ သာယာဝတီထဲက ရွာလေးပါ ။ဆရာစံတော်လှန်ရေးမှာ အဲရွာလေးမှာ တိုက်ပွဲ ၂ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ တယ် ။
ပထမဖါးရွှေကျော်က လူသိတယ် ။ လယ်သမား သူပုန်တွေဖက်က အစီအမံ နဲ့ စောင့်တိုက်တာမှာ ရာဇ၀တ်ဝန် ဦးမောင်ကလေးတောင်ကျကျန်ခဲ့ ရတဲ့ ထိ အင်္ဂလိပ် ပုလိပ်တပ်က အထိနာသွားရတယ်
ဒုတိယဖါးရွှေကျော်ကျတော့ တမျိုးဗျ ။
ဖြစ်ပုံက အလံ တောင်ပေါ်ကို ဘုန်းကြီးတပါးတက်လာတယ် ။ သပြေပင်ခြေကန်မန်းပြတော့သပြေပင်ညှိုးကျသွားတာကို အဲနားက လူစုက မြင်တော့ ဘုန်းကြီးကိုယုံပြီး သူ့ စကားနားထောင်ပြီး ဖါးရွှေကျော်မှာ ရှိနေတဲ့ ကုလာတပ်ကို သွားတိုက်တာ ။
အဲလိုတိုက်တာလဲ ကျန်တဲ့ လူစု မသိလိုက်ဘူး ။
အတိုက်မှာ ဟိုက Lewis gun နဲ့ဆီးနှိမ်တော့ သွားတိုက်တဲ့တပ်လဲ ပျက်ရော
အဲအပျက်မှာ ကုလားတပ်က ထပ်နင်းလိုက်လာတော့ ကျန်တဲ့သူတွေက မသိလိုက်တော့ ဘာမှ မယ်မယ်ရရမခုခံရဘဲ အလံတောင်ပေါ်ထိ ရောက်ပြီး သာယာဝတီ ဂဠုန်တပ်ပျက်ရောဗျာ ။
ပြသနာတခုကို ဖြေရှင်းတယ်ဆိုရာမှာ တခါတလေကျ ရှေ့ လောကြီးမရဘူးဗျာ .။
မှန်ပါတယ် .။ ဗမာ့ ကျန်းမာရေးပြသနာက ကြီးလှတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရောဂါက ကင်ဆာဗျ ။
ပါရာလေးတိုက် ။ ရော့ သောက် ပျောက်မဟုတ်ဘူး
ခု ဖြစ်သင့်တာက ကိုယ်ဆီက စနစ်တခုလုံးမှာ ကောင်းတာလေးတွေ ဘာရှိလဲ ။ အဲကောင်းတာလေးတွေယူ
သူများ နိုင်ငံတွေက ကောင်းကွက်လေးတွေကို ရှာ ။ အဲကောင်းကွက်လေးကို ဘာကြောင့်ကောင်းလဲ ကြည့်ပြီးယူ
အဲလိုလုပ်ယူရမှာလေ ။ ဟိုဘက်မှာ ကိုပြောတာအဲဒါဘဲ ။.ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှုမှာ ယူကေ စနစ်ဟာ အဘ်ိုးနဲ ၀န်ပါဘဲ ။ လိုတာက ကျွမ်းကျင်ပြီး ကိုယ့်limit ကိုသိတဲ့ဝမ်းဆွဲနဲ့သူတို့ ကိုထောက်ပံ့ ပေးမဲ့အိုဂျီလေ ။ အဲဒါလမ်းစလေးတခုဘဲ။
အဲလမ်းစလေးကို ရှေ့ ဆက်နင်းကြည့်ဘို့ ပါ ။ ဒါက တဦးကောင်းနဲ့ မရဘူးဗျ. ။
တဦးကောင်းပြောလို့တခုတော့ သတိထားမိပါ့ ။ အရင် ဆရာလှမွန်ပို့ စ်မှာ ဗမာဆရာဝန်တွေ အသုံးမကျဘူး။ ဗမာ့ကျန်းမာရေးဘာညာဆိုတဲ့လူ ၃၀လောက်ဟာ ကဲ ခုသေချာလေးဆွေးနွေးရအောင်လဲဆိုရော အင်း အမြီးဖျားလေးတောင်မမြင်ရ ။ ဟဟ
ကိုတင့်တို့ ကိုဘရာဗိုတို့ရေ.. မက်ဒီကယ်ကလူတွေ သီးသီးသန့်သန့် ရင်ဖွင့်လို့ရမယ့် ဖိုရမ် သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ်ကလေးတစ်ခုလောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်ဗျာ..))
ဒီမှာလည်း ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် ကိုByakga. ကျွန်မ မသိတဲ့ Medical နဲ့သာ ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ဆွေးနွေးနေရင် ကျွန်မ ၀င်မစပ်စုပါဘူး။ အခု ဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာက Health Care Community တခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေလို့သာ ၀င်ပါတာ ဖြစ်တယ်။ ခေတ်သစ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမှာ Quality Care ဖြစ်ဖို့အတွက် Medical Staff တွေကသာ ဦးဆောင်နေတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Health Care Professional Team အနေနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ကြပြီး အဲဒီ Team မှာ ပါတဲ့ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာ သူ့အလုပ်သူသိ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သိကြတဲ့အပြင် Team member အချင်းချင်းမှာလည်း ဘယ်သူက ဘာလုပ်တယ်။ လူနာအတွက် ဘာလိုအပ်ရင် ဘယ်သူ့ကို Forward လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ Team member အားလုံးက သိကြပါတယ်။ ဒီလို သိအောင်လည်း ၁၉၉၀ ပတ်ဝန်းကျင်စကပြီး တက္ကသိုလ်က Health Care Professional တွေကို မွေးထုတ်ရာမှာ Case Study တွေအမျိုးမျိုးကို Research အထောက်အထားတွေနဲ့ ကိုးကားပြီး ဆွေးနွေးဖြေရှင်းရတဲ့ အလေ့အကျင့် အပါအ၀င် Health Care Professional Team တခု မှာ လိုအပ်တဲ့ Communication နဲ့ အလုပ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး Medical Staff တွေဟာ Team bember ထဲမှာ အမြင့်ဆုံး ပညာရှင်တွေ ဖြစ်ကြပေမဲ့Health Care Team တခုမှာ tema member တွေသာ ဖြစ်သွားကြပြီး ရှေးရှေးတုန်းကလို ဦးဆောင်လမ်းညွှ့န်သူတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အနှစ် ၂၀ ခန့်တောင် ရှိနေပါပြီ။
ကို Byakga ကို ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ Profile ကို ထောက်ပြီး Byakga ဘလော့ဂ်ကို ကျွန်မ မကြာခဏ ရှာကြည့်သေးတယ် တခါမှ ရှာမတွေ့ဘူး။ အခုတော့ တခါတည်း Link ယူထားလိုက်ပြီ။ စာပြန်မရေးသေးဘူးလား။
အင်း.. ဟုတ်တယ် မငယ်နိုင်ရေ.. ခုနောက်ပိုင်း စာသိပ်မရေးဖြစ်တော့ဘူး.. ရေးဖို့ကိုစိတ်မပါတော့တာ..
မက်ဒီကယ်ဖိုရမ်လို့ပြောတာက မက်ဒီကယ်သမားအကုန်ပါပါတယ်.. မက်ဒီကယ်သမား အချင်းချင်းပြောတဲ့စကားတွေက တခါတခါ ပတ်ဗလစ်တွေ နားမလည်နိုင်တာတွေပါလို့ပါ..
professional အမည်ခံ doctor များသို့ 
အများ ငြင်းခုံထားသော comments များလည်းဖတ်ပြီးပါပြီ.
ပြည်သူတွေဘက်မှ လည်း ငွေရှာလွန်သောဆရာဝန်များ ပေါ်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန်များဘက်မှလည်း professional ခေါင်းစဉ်အောက်မှနေပြီးငွေရှာသင့်သည်ဟုအပြင်းအထန်ခုခံ သည်မှာအံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်..
ဆရာဝန်မှလူနာဆေးကု သည်မှာ မထူးဆန်း၊ အမှားမှားအယွင်းယွင်း ဖြစ်သည်ကတော့ဆိုးလွန်းသည်..
ဒီကြားထဲ professional မှ တပြားသားမှမရှော့.. မြန်မာပြည်မှဆရာဝန်အများစု ကတော့ ငွေရှာ ကောင်းကြ
သည်ကို professional ဟုမြင်ပုံရသည်...
ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်သင်ပေးလိုက်သော Institute of medicine အနေနှင့်လည်း
တာဝန်ကျေ ဆရာဝန်များလိုအပ်သောအရေအတွက်အတိုင်းမွေးထုတ်ပေးရေးသာ အလေးထားကြပုံရသည်..
အောင်အောင်မြင်မြင် မည်ကဲ့သို့ သော Research များပြုလုပ်သည်..နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ခံရသည် ဟုမကြားဖူး
လစာ သိန်းရာနှင့်ချီရကြသည်ဟုဆိုသော professional doctor ဆိုသူများသည်လည်း(professional ပီပီသသ) အောင်မြင်သော
မည်သည့် medical research မျိုးတွင်ဦးစီးဦးဆောင်ပါဝင်သည်.. မည်သို့ သော ဆေးဝါးများ တီထွင်သည်.. မည်မျှခက်ခဲသော ခွဲစိတ်ကုသခြင်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်သည် ဟုမကြားဖူး(လွန်လေခဲ့သောဆယ်စုနှစ် များ မှ ယနေ့ အထိ)..
ဆရာဝန်ဆေးကုသည်.. ဆိုက်ကားသမားဆိုက်ကားနင်းသည် ဆိုသည်မျိုးကိုတော့ media တို့ ရေးလိမ့်မည်မထင်...
အခုတော့ ထိုသို့သောဆရာဝန်များက လူနာကိုသမရိုးကျဆေးကုသည်ပင်အလွဲလွဲအချော်ချော်....
ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတချို့ပြန်ဆုံဖြစ်တုန်းစကားပြောဖြစ်ကြသည်.. ဆရာဝန်ဖြစ်ကြသူများလည်းပါသည်..
သူတို့ အချင်းချင်းပြောကြဆိုကြ.. ကျွတော်တီု့ ကနားထောင်.. သူဘယ်လောက်ရသည်၊ ငါဘယ်မျှရသည်..
သူတို့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆုံချိန်တုန်းက သူတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ကြသည်မှာ လသားမျှသာရှိသေးသည်..
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုငွေရှာရမည် ဆိုသည်က သူတို့ အတွက်အရိုးစွဲနှင့်နေပြီး.. အတုမြင်အတတ်သင်ကို..
၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှစ်များ reattachment and microsurgery ( team leader Prof U Myo Myint Ortho and ortho team RGH )
၁၉၈၅-၈၈ thoracic surgical unit ( pioneering of decortication surgery for empyma Thoracic Team leader Prof U Tin Mg Htwe and team members Dr Norman Hla( now retired prof ) Dr Khin Mg Aye ( now retired prof ) Dr Paw Oo ( Now abroad ) )
1990 - Development of Hepatitis vaccine in corroboration with WHO and Pasteur institute - Dr Khin Mg Win ( Now retired professor )
1995-98 - Liver transplant ( Dr Norman Hla ( now retired professor ) and team
1993 to 98 minimally invasive urolithiolytic therapy ( Prof U Than Aye and team )
Laparoscopic and endoscopic procedures ( 1993 to 1998 ) Prof U Ye Myint and team and 1999 to ??
Dr U Paw Oo ( later Prof. Now ? Abroad )
ကိုတင့်ပြောထားတာတွေရဲ့ နောက် နည်းနည်းပါးပါး ထပ်ဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
Prof Daw Yin May ရဲ့ (May's Disease/Amoebic Vulvoaginitit) က Japan မှာ လုပ်တာ ထင်တယ်။
Dr Barry Paw ရဲ့ haematology သုတေသနတွေက အမေရိကန်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်နေလို့ ကျနော်တို့ ကြားထဲက ၀င်ဂုဏ်ယူလို့များ ရမလား။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာ့ ဆေးသုတေသီနဲ့ ဆေးသုတေသနတွေ ရှားတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။
အဲဒီလို ရှားရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဆေးသုတေသန လုပ်ငန်းနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလို့ မဖြစ်နိုင်လို့ ပါလို့ ပြောချင်တယ်။ ( ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကို မဖြစ်နိုင်တာပါ )
တစ်ဖက်ကလည်း တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်ဆိုတာ စဉ်ဆက်မပြတ် သုတေသန လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေမှ ပညာကွန်ယက်တွေ တည်ဆောက်နိုင်မှ တက္ကသိုလ် အဆင့်မီတယ်လို့ ပြောချင်ကြမဲ့သူတွေ ရှိမယ်။ သုတေသန အားနည်းတဲ့အတွက် ဥပမာအားဖြင့် မင်းတို့ မြန်မာလူမျိုးမှာ Cushing's syndrome ဖြစ်ရင် hyperpigmentation symptom ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ပြသလဲဆိုတာမျိုး လာမေးရင် ရဲရဲတင်းတင်း မပြောနိုင်ဘူး။ ဒီ့ထက် လွယ်တာတွေလည်း (ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင်) မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဟော အင်္ဂလန်တို့ လက်တင်အမေရိက တို့မှာ ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုရင် ရွတ်လို့ရတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် မင်းတို့ မြန်မာ့လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုရင်တောင် မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာ "တို့လားကွ၊ တို့တော့ သန်းငါးဆယ်လောက် ရှိတယ်ကွ" လို့ မှန်းပြီး ပြောကြမှာပါ။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၅၂.၄ သန်း ကို ဘယ်မျက်ခွက်နဲ့ ယုံရမှန်း မသိဘူး။
သုတေသန အားနည်းတာတွေပြောလို့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ထုတ်ပြီး တကယ် သုတေသန လုပ်ခဲ့တဲ့၊ လုပ်နေတဲ့ (ဥပမာ လောလောဆယ် Malaria နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Research တွေလုပ်နေတဲ့ ဆရာများ) ဖတ်မိပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မှာ စိုးပါတယ်။ ဆရာတို့ကတော့ ချွင်းချက်ပါ။ ဆရာတို့ကို လေးစားလျက်။
(ဆန္ဒတော့ မစောပါနဲ့ ကို zamipi။ နောက် သိတဲ့လူများ ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။)
အခုလို ဗဟုသုတ ရအောင်မျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်ပြောလိုတာက အဆိုပါ Professional ဟုဆိုနေသော လစဉ်သိန်းရာနှင့်ချီရှာဖွေနိုင်သော ဆရာဝန်ကြီးများ
အနေနှင့် R & D လုပ်ငန်းများ ကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသလား.. နာမည်ကြီး ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများကရော
sponsor လုပ်သည်ဟုကြားဖူးပါသလား.. အဆိုပါသူများက ငါတို့ မလုပ်နိုင်တောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူများရှိရင်လုပ်ကြပါစေဆို
ပြီး ဘာ foundation ညာ foundation ဆိုပြီး ဖွဲ့ စည်းကြသည်ဟုလည်းမကြားဖူး.. ပိုက်ဆံ များများရတာတခုတည်းအကြောင်းပြပြီး
professional ဆရာဝန် professional ဆေးခန်းဟုနာမည်ခံ ချုင်ကြသည်.. မြန်မာနည်းမြန်မာဟန်၊ ကိုယ်စံနှုန်းနှင့်ကို professional ဟုဆိုလျှင်တော့ ရှိစေတော့..
ဆေးကျောင်းများတွင်ရော R & D department အနေဖြင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိရဲ့ လား.. ကျွန်တော်လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာကြည့်တော့
university of medicine 1 ရဲ့ objective http://www.um1ygn.edu.mm/objective_of_institute.asp ဆိုပြီးတွေ့ ပါတယ်... medical / clinical research ဆို တဲ့ စကားလုံးမျှမပါ... high income earner(professional ဟုခေါ်ကြသူများ) ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်သော ထို ဆရာဝန်များလုပ်ရကောင်းမှန်း မသိရှိသည်မှာလည်းမဆန်း..
ဆေးကုသသူ ဆရာဝန်များကိုထားတော့.. ဆေးကျောင်:များမှ အချို့ အချို့ သော academic ဆရာဝန်များ income ကလည်းကြောက်ခမန်းလိလိ... များပြားလှစွာသော ကျူရှင်.. မကြာသေးသော ကာလကမှ ဆရာဝန်ဖြစ်သွားသော ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းများလည်းထို အခက်အခဲကို ခါးစည်းခံခဲ့ကြရသည်.. ထို့ကြောင့်ထင်သည် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းများသည်လည်း ဆရာဝန်ဖြစ်သည်နှင့် ငွေသာလျှင်ကိုးကွယ်ရာ ဆိုပြီးအရှင်လတ်လတ်ဘ၀ပြောင်းသွားကြသည်..လူသားမဆန်ကြတော့.. အံသြမဆုံးရှိတော့သည်..
professional doctor (alias) daylight robbery ကျူးလွန်နေသူများသို့ 
what u mean wtf ? u may not be gentle man.
should be polite. if not there is no place for u in this society.
How stupid guy!
မင်းသိထားဖို့ က ဘုရားသားတော် ရဟန်းသံဃာမှန်ရင်
အားလုံးဟာ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာ၊ ပညာ (ချွင်းချက်မရှိ) ပြည့်စုံကြသူတွေဘဲ၊
မင်းပြောသလိုမပြည်စုံဘူဆိုရင် ရဟန်း၊သံဃာလို့ မခေါ်ထိုက်တော့ဘူး.. သင်္ကန်းဝတ်လူတွေဘဲဖြစ်မယ်..
အခုလိုဘဲ ဆရာဝန်ဆိုတာ ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ် နဲ့ မညီတာနဲ့ ဆရာဝန်မဟုတ်တော့ဘူဆိုတာလည်းသိဖို့ လိုကြလိမ့်မယ်(ရှက်တတ်ရင်)..
ဆေးပညာနဲ့ ဘွဲ့ ရ ၊ ဆမလက်မှတ် ဆိုတဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်မယ်.. အခုခက်တာက လူသိထင်ရှား ဆမ အသိမ်းခံရမှ
ဆရာဝန်မဟုတ်လို့ ထင်နေကြတာခက်တယ်.. စိတ်ဓာတ်ရေးရာ နိမ့်ပါးကြတာကို..
ကိုရင့်အတွက် ပို့ စ်ကိုသီးသန့် တင်ပေးထားပါတယ်
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုရင်ရေးတဲ့ ပထမ ကွန်မင့်ကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ခုချိန်ထိ ဗမာပြည်ထဲမှာဘဲ ရှိနေပြီး
အပြင်ဆေးခန်းနဲ့ လဲ မကင်းနိုင်သေးတဲ့သူတယောက်ကို သတိရမိပါတယ်
သတိရမိသလိုဘဲ အပြင်ဆေးခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေရသေးတဲ့အဲလူရဲ့ရာဇ၀င်က ဘယ်လိုဆိုတာ ( အကိုမင်းဒင်စကား ခဏငှားသုံး ရရင်) ကိုယ်တိုင်မိုးကို ဒူးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်တက်တိုက်ခဲ့ ရုံမက တပည့်တွေကိုပါမိုးကို ဒူးနဲ့တက်တိုက်ရဲတဲ့သတ္တိရော အရည်အချင်းပါ မွေးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဲလိုလူတယောက်ခုကို ဗမာပြည် အပြင်ဆေးခန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေသေးတယ်ဆိုရော သူရဲ့နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ရတဲ့academic , research and clinical qualities ကိုပါ ရေးပြမလို့ ပါ .။
ပညာရှင်ဆိုတာဒီလိုကွလို့ပြရုံမက ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ ဒီလိုကွလို့ပြနိုင်ခဲ့တဲ့သူ့ အကြောင်းကိုရေးဘို့ က ခက်နေတဲ့အကြောင်း ၂ခုရှိပါတယ်
၁) သူကိုယ်တိုင်က ခုချိန်မှာ သူများ လက်ခုတ်ထဲက အီးအီးဘ၀ပါ ။ စားရင်လဲ ခံရ မျိုရင်လဲ ခံရမှာပါ ။ တော်ကြာကိုယ်လက်ဆော့မိလို့သူဒုက္ခရောက်မခံနိုင်ပါ
၂)ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒါတွေကို ပြန်ရေးနိုင်လောက်တဲ့မာကျောတဲ့ နှလုံးသားမရှိသေးပါဘူး ။အဲတော့ ခုဟာက နမူနာလေးကိုဘဲ ခံသာအောင်ဟာသလေးဖေါက်ပေးထားတာ ဖတ်ပြီး ဟိုတုန်းကလဲ ဒီလိုဘဲ
ဒီပို့စ်ထဲမှာ ဆက်လက်ပြီး လာရောက် ဆွေးနွေးနေသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Eric ရဲ့ Comment မှာ အဖြူရောင် (ဆေး ၂) ပြောထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာကို အတိအကျ မသိရတဲ့အတွက် ကျွန်မအနေနဲ့ ဘာမှ သဘောထားမပေးလိုပေမဲ့ ဆရာ ဦးကြည်စိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ်မှာတော့ ကျွန်မ ပို့စ်ထဲမှာလည်း တကယ်လို့ မှားသွားတယ် ဆိုရင်တောင်မှ သေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတဲ့ ပြဿနာမှာ သူဟာအဓိက တာဝန်ရှိသူမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အဖြူရောင် (ဆေး ၂) ရဲ့ ဆရာဦးကြည်စိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ကျွန်မ လုံးဝလက်ခံပါတယ်။
Eric ရဲ့comment ထဲက အဖြူရောင်ဆေး ၂ ရဲ့mail forward ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးပါပြီ.
mail ကို comment မှာတင်တယ်ဆိုကတဲက mail ပိုင်ရှင် နဲ့Eric တို့ စိတ်သဘောထား
ခံယူချက်ခြင်းကိုက်ညီပြီးသားလို့ ယူဆပါတယ်..အဖြူရောင်ဆေး၂ ဆိုတာဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်မသိလို့ Eric ကိုပဲပြောပါ့မယ်..
အခုဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးက အဘယ်မျှ အရေးပါအရာရောက်ပြီး၊အလွန်တော်ဆိုသောသူတစ်ယောက်ဟုသိရပါတယ်..
ကျေးဇူးပါ.. တစ်ခုသိထားဖို့ က ဆရာဝန်တွေတင်မကပါဘူး တခြားသော life cirtical case တွေမှာတာဝန် ယူသူများပါ မိမိလုပ်ငန်းခွင်မှ
ကင်းကွာရန် အကြောင်းတစုံတရာရှိက ကြိုကြိုတင်တင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်.. အချိန်ယူလက်စသတ်ကြရပါတယ်...
ထားတော့.. အလွယ်ပြောရင်သမားရိုးကျ office staff များတောင် on leave လိုချင်ရင် ကြိုတင်စီစဉ်ကြရပါတယ်..
အခုဆရာဝန်ကြီးဆိုသူရဲ့လုပ်ရပ်က ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး...နိုင်ငံခြားသွားဖို့ မခွဲစိတ်ခင်ကတည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားလို့သိရပါတယ်..
ရှင်းပါတယ်.. urgent ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး.. တာဝန်တစ်ခုကိုယူပြီးဆိုရင်ပြီးဆုံးအောင် ထမ်းဆောင်ရပါတယ်..
by name နဲ့ လာတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်ပေါင်းများစွာထဲ က ငါမှငါ့ ကိုရွေးသဟဲ့သွားခါနီးလာခါနီးလက်မှတ်ဖိုးလေးကြေသဟဲ့
ဆိုပြီး လုပ်ချင်ရင်လုပ်ပြီးဖုတ်ဖက်ခါထသွားလိုက်တာ.. အံ့သြစရာ...သာမန်းလမ်းဘေးကွမ်းယာဆိုင်က ကွမ်းယာရောင်းသူလို
သူ့ အောက်က (၂ယောက် မရှိနိုင် ဆိုသောဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ယှဉ်ရင်) သူငယ်နပ်စားသာသာနောင်လာနောက်သားဆရာဝန်အပေါင်းတို့
မည်သို့ ပြုမည်မသိ.. မတွေးဝံ့စရာ..
ဆေးလောကအသိုင်းအ၀ိုင်းဟုဆိုထားသဖြင့်မေးချင်ပါသည်.. မည်သူက အဖြူရောင်ဆေး ၂ တို့ Eric တိုကိုပြေရေးဆိုခွင့်ရှိသူများဟုသတ်မှတ်ပေးထားပါသလဲ... အဖြူရောင်ဆေး၂ တို့ Eric တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဟုပြောင်းလဲ
သုံးနှုန်လျှင်ပိုမိုဆီလျော်ပါလိမ့်မည်... အခြားသော ဆေးလောကသားတို့ တွင်လည်းလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်..
ယခုသတင်းကိုရေးသားသော media editor ဆိုသူမှာလည်း ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆိုသည် မေ့နေပုံရသည်..
ဒါပေ့မယ် သူတာဝန်က အခု အယ်ဒီတာ တာဝန်.. သတင်းပေးရမှာသူ့ တာဝန်.. ငါအသိုင်းအ၀ိုင်းမကောင်းကြောင်းငါမပြောလုပ်လို့မရ..
ငါအသိုင်းအ၀ိုင်းကမှမြင့်မြတ်သည်.. ကျန်တာအကုန်အောက်တန်းစား ဆိုသည့် ပဒေသရာဇ်တွေးအခေါ်များကတော့ ခေတ်ဆွေးလွန်းနေပြီ.. မပြောလိုတော့ပါ..
forward mail တစ်စောင်ဖြန့် ၇င် ၅ကျပ် ၁၀ ရမယ်.. မဖြန့် ရင် ငရဲကျမယ်... ဆိုသည့်နှင့်ဘာအကြောင်းအရာပါသည်မသိ..
forward လိုက်သည် အဖြူရောင်ဆေး၂ ရဲ့ မေးမျိုးကတော့ spam mail မျိုးထက်ပိုမည်မထင်.. အသိဥာဏ်ရှိသူ inbox ထဲမှာတော့တွေ့ ရလိမ့်မည်မထင်...
ကျွန်တော်က ဒီ အဖြူရောင်ဆေး၂ ဆိုတဲ့သူရေးတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ့ လို့ တင်ပေးလိုက်တာ။ အမှန်က မေးလ်ထဲရောက်လာတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုဒ်၁ခုမှာ တွေ့ လို့ အစ်မတို့မြင်ရအောင်တင်ပေးလိုက်တာ။ မှန်လို့ တင်တာတို့၊ မှားလို့တင်တာတို့ ကြိုက်လို့တင်တာတို့ ဖြစ်မှာစိုးနှင့် ကိုယ်တိုင်ရေးသည်ထင်မှာစိုးလို့ မေးလ်ထဲကရေတာလို့ လွယ်လွယ်ရေးလိုက်တာ။ ချုံပုတ်ထဲက လက်သီးပုန်းပြတာခံရသေး...ဟဟ။ ကောမန့်ဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ဖို့ထားတယ် ထင်နေကြပုံပဲ...
အမှန်ကိုတွေးရဲ၊လက်ခံရဲ ပြီး.. အမှန်အတိုင်းပြောရဲံပါစေဗျား...
your attitude shows your altitude
ဟုတ်ပ ဆရာဝန်ကြီးရယ်.. ကိုယ်ဆီ အားကိုးတကြီးလာတဲ့ လူနာကို ဆောဒီး လုပ်လိုက်ရောပါ့နော့ လုံးဝထိမထားရင် မတ်ဒီကယ်နဂလစ်ဂျန့်မှ မဟုတ်တာ ခက်ပ။ ကုန်သမျှ ပိုက်ပိုက် ၁၁သိန်းကကော ဆေးရုံ ဆားဗစ် မပေးရဘဲ ဆရာကြီးဘဲ ရသွားလို့ ခရီးစရိတ် လောက်သွားတာလား ဟဟ။ ရှာဝင် အယ်ဒီတာကြီးကကော စတတ်တိုကြီးနဲ့ စာရေးတာလား (အံ့ဖွယ်)။ သူနဲ့ အီလဲဗင်းမီလျှံနာကကော ဘာလို့ ရှာဝင် မလုပ်ပါလိမ့် ငွေတွေ များကြီးဝင်မှာ စိုးလို့နဲ့ တူတယ် သာဓုပါ။
နောက်ပီး AS တစ်ယောက်ဝင်ငွေနဲ့ အငယ်တန်းသတင်းထောက် တစ်ယောက် ၀င်ငွေ (ဟိုဧည့်ခံပွဲ ဒီဧည့်ခံပွဲ မပါသေး) ဘယ်သူပိုများလဲ သိချင်လို့ ဖြေပေးပါဦး။
from weekly eleven,
"ကျွန်တော်က လူငယ်ဆရာဝန်တွေကို မေးခွန်းတစ်ခုအဆက်မပြတ်မေးကြည့်နေဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးပါတယ်။ "ဒီလူနာဟာ ငါ့ရဲ့ ရင်သွေး၊ ငါ့ရဲ့ မိဘ၊ ဒါမှမဟုတ်ငါချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ငါခွဲစိတ်ချင်တုန်းပဲလား"
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ တုန်းက ဂရိလူမျိုးဆရာဝန်ကြီး Hippocrates (BC 460- 377 BC) က "ဆရာဝန်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးတာဝန်က လူနာကိုမထိခိုက်မနစ်နာစေဖို့ ပဲ။ နောက်ထပ်အချက်က ရောဂါကိုကုသတဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်က လူနာကိုလိုတာထက်ပိုပြီး မနာကျင်ပါစေနဲ့ ။ လူနာကိုသေစေလောက်တဲ့အထိ အန္တရာယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။ တစ်နည်းပြောရရင်လူနာကိုကုသရေးက ဆရာဝန်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး" လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပို့ စ်နဲ့ များဆိုင်မလားလို့ ။ ကြော်ငြာလာဝင်တာပါ။
အို ရှိရှိသမျှ တန်ခိုးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကယ်ပါ
လူငယ်တွေကို ပေးတဲ့အကြံကလဲ ကြည့်လဲပေးပါကွယ်
လောကမှာ သူ့ နေရာနဲ့သူ ပိုင်းခြားပြီးသား
အဲဒါကို လောက နိယာမတရားတွေလို့ခေါ်တယ်
လူနာဆိုတာ ကုဘို့ 
ချစ်သူဆိုတာ အင်းး ချစ်သူဆိုတာ
ချစ်သူဆိုတာ လက်ဆောင်ဝယ်ပေးဘို့ 
အဲလို နိယာမတရားကြီးတွေ သူ့ နေရာနဲ့ သူကို လာမရောနဲ့ လေဗျာ
8.19 Self-Treatment or Treatment of Immediate Family Members
Physicians generally should not treat themselves or members of their immediate families. Professional objectivity may be compromised when an immediate family member or the physician is the patient; the physician's personal feelings may unduly influence his or her professional medical judgment, thereby interfering with the care being delivered
ဆောရီးနော် ကို၊မတင့် 
ကျွန်မရှင်းအောင်မရေးပြမိတော့ ငြင်းခုန်စရာတွေထပ်တိုးနေဦးမယ်။ အဲဒါက ဂျပန်က ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် အမေရိကားမှ ဖားသားစတာဒီကပြန်လာပြီး ဆေးပညာအပေါ်ရေးထားတာလေးတွေပါ။ မိမိ မိသားစုဝင်တွေဆိုရင်ခွဲဦးမလားလို့ မေးတာကလည်း မခွဲသင့်တာတွေကိုပြောတာပါ။ခွဲလိုက်မှပိုဆိုးနိုင်တာမျိုးကို ခွဲမခွဲမေးတာက ကိုယ်တိုင်ခွဲပေးမပေးဆိုတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မတူပါဘူး။ ဘယ်သူကခွဲခွဲပါ။ အခွဲခံမခံကို စဉ်းစားခိုင်းတာ၊ စာနာကြည့်ခိုင်းတာပါ။ အဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်မှ ပိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ဆေးပညာကိုက“လူနာကိုသာကုသရန့်၊ ရောဂါကိုကုသဖို့ မဟုတ်၊ လူနာသည်ရောဂါမဟုတ်၊ လူဖြစ်သည်” ဆိုတာကိုလက်ကိုင်ထားနေတာကိုသူမြင်ခဲ့ရပြီးနောက်၊ အဲတာနဲ့ အကွာကြီးကွာနေဆဲဂျပန်ဆေးလောကကို သူကစတင်ဦးဆောင်ပြီးပြုပြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုအသက်(၉၀)ကျော်တိုင်အောင်မြင်နေဆဲဆရာဝန်စာရေးဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကျွန်မဘလော့မှာတော့ နည်းနည်းကူးတင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ထပ်မငြင်းတော့ပါဘူး။
စာအုပ်နဲ့ဘလော့ လာကြော်ငြာတာကိုး
ဆွေးနွေးတာမှတ်လို့ပြန်မိတာပါလေ
( သြော် ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ
ခက်တာက ကိုတို့ ကလဲ ကြော်ငြာဆို ထက်ထက်မိုးဦး ကော့လန်ကော့လန် လုပ်ပြမှ ကြော်ငြာမှန်းသိတာကိုး ။
ဒီတိုင်းဆို ကြော်ငြာမှန်းမသိတာများတယ် ဟဟ )
အောက်မှာ အဖြူရောင်ကို ချေပထားတဲ. comment တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဖြူရောင်ရဲ. ထင်မြင်ယူဆချက်ကို မလေးစားနိုင်တဲ.အတွက် စာရေးနေတဲ. အဖြူရောင်အစစ်ဟုတ်မဟုတ် သံသယရှိပါတယ်.. ၂ခါ ခွဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
http://myochitmyanmar.org/ မှာ တင်ထားတဲ့ အဖြူရောင် ဆေး-၂ ရဲ့ မတရားဖြေရှင်းချက်ကို ပြန်လှန်ရေးသားခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ http://myochitmyanmar.org/ မှာ comment ပေးလို့မရတဲ့ အတွက် ရတဲ့ ဆိုက်မှာရေးလိုက်တာပါ။
အဖြူရောင် ဆေး-၂ ရဲ့မူရင်း အရေးအသား က အတော့် ကို ပြောင်မြောက်လှကြောင်း http://myochitmyanmar.org/
မှာ သွားဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ ယွန်းပိုးပိုး တင်ထားတာက ဖြတ်ညှပ်ကပ် version ပါ။
အောက်ပါပြန်စာကို ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စိတ်မရှိနဲ့ ဖြေရှင်းသူ (အဖြူရောင် ဆေး-၂) ရေ။ ပြောစရာတွေ့လို့ဝင်ပြောတော့မှာပါ။ ဦးကြည်စိုး ဟာ တော်တဲ့
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူ့လိုတော်တာ ၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်း
တာ နှစ်ယောက်မရှိနိုင် တော့ ဘူး ဆိုတာကတော့ အလွန်အမင်း ပင့်ရာကျပြီး အခြား ဆရာဝန်ကြီးတွေကို စော်ကား
ရာလည်း ရောက်နေပါတယ်။ ဦးကြည်စိုး တော်တယ် ၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင် တစ်ကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဦးကြည်စိုးထက် ကို ပိုတော်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ Surgeon ဆရာဝန်ကြီး တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးရှိသေးတယ်
ဆိုတာစစ်တမ်းတောင်လိုက် ကောက်နေစရာမလိုပါဘူး ခင်ဗျား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ တော်သ
ထက်တော် ၊ ကောင်းသထက် ကောင်းတာတွေ ဟာ သူ့ထက်ငါ ကို ရှိနေတတ်လို့ပါဘဲ။ ဦးကြည်စိုးဟာ သူတာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းဘဝ တစ်လျှောက်လုံး တော်ခဲ့ ကောင်းခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သံသယလည်း မဝင်ပါဘူး။
ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အရင်က တော်ခဲ့တတ်ခဲ့ လို့ အမြဲတမ်းတော်နေကောင်းနေမယ်လို့ ဘယ်က
များ အာမခံချက်ရထားပါလဲ လို့ဖြေရှင်းသူကို မေးချင်ပါတယ်။ ဦးကြည်စိုး လို တော်တဲ့ လူ သာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး
ဆိုရင် နိုင်ငံတော်က ဘာလို့များသူ့ကို retirement ပေးလိုက်တာပါလိမ့်? စဉ်းစားစရာပါ။ကျောသားရင်သား မခွဲခြား
တဲ့ တစ်ကယ့်ဆရာဝန် ကောင်းဆိုရင် free dispensary တွေမှာ free service မပေးဘဲ ဘာလို့များ SSC လို ပိုက်ဆံ
အများကြီးတတ်နိုင်မှ တက်ခွင့်ရတဲ့ ဆေးရုံ မျိုးမှာ အလုပ်လုပ်နေတာလဲခင်ဗျာ? ( free dispensary တွေမှာ free
service ပေးမှ ဆရာဝန် ကောင်း ၊ စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဖြေရှင်းသူ ၏ အလွတ်တည်
ပင့်ချက်များကို highlight လုပ်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။) မစဉ်းမိဘူးလားခင်ဗျ? ဒါတွေမပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖြေရှင်း
သူ ဘက်က လာပုံ လေးအတိုင်း တုန့်ပြန်နေရတာပါ။
GP မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ GP က Diagnosis မှားတိုင်း SSC လို ဆေးရုံ
ကြီးမျိုး ၊ ဦးကြည်စိုးလို ကျောင်းပေါင်းစုံမှာ professor လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ လူမျိုးကလိုက်မှားစရာလားခင်ဗျ။ GP မှား
တဲ့အတိုင်း လိုက်နင်းသွားလို့ ဆေးလောကမှာ ရလားခင်ဗျ၊ SSC လို ဘာလူနာလာလာ အရင်ဆုံး ဆီး ဝမ်း သွေး
လေ လိုတာရော မလိုတာရော လျှောက်စစ်ပြီး နင်းကန်ဘော်ချက် တတ်တဲ့ ဆေးရုံ မျိုးက GP မှားတာကို မှားတဲ့
အတိုင်း လိုက်ကမိတယ် ဆိုတာ တော်တော် တိကျတဲ့ reliable အထောက်အထားပဲနော်။ GP ညံ့တာ မညံ့တာ
အသာထား ၊ ဦးကြည်စိုးက သာမန် GP ထက်တော်တဲ့ professor ကြီးလေဗျာ။
တော်တယ်ဆို? SSC မှာလည်း
တော်တတ်တဲ့ specialist တွေ တစ်ပုံကြီး ရှိနေတယ်လေ။ Dengue fever ရဲ့ symptoms တွေ ၊ DHF ဟုတ်မဟုတ်
verify လုပ်တာတွေဟာ ဒီခေတ်မှာ အရမ်းကို လွယ်လွန်းပါတယ်ဗျာ။ Qualified GP ဆိုရင်တောင် Dengue fever
ဆိုတာချက်ချင်း predict လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ဖြေရှင်းသူ မသိတာ အံ့ဪမိပါရဲ့။ Dengue Shock (DSS) ရဲ့လက္ခဏာ
အချို့ က appendicitis နဲ့ တူပေမဲ့ DSS ရဲ့ လက္ခဏာ တွေမှာ appendicitis နဲ့မတူ ထူးခြားတာတွေအများကြီးဆိုတာ
ဦးကြည်စိုး ရော ၊ SSC ကတာဝန်ရှိသူ ဆေးဝန်ထမ်းတွေရော ၊ ဖြေရှင်းသူရော မသိတာတော့ စိတ်ပျက်စရာပဲဗျ။
အဲဒါကို လူပြိန်းတွေမှသာ မသိကြတာ ၊ ဦးကြည်စိုးလို ကိုတော်ကြီး နဲ့ SSC က မယ်တတ်ပ တွေမသိဘူးဆိုတော့
သူတို့တစ်တွေ ရဲ့ ပညာအဆင့်အတန်းက လူပြိန်း စကွဲ (square) တွေများလား? ဒီလိုပြောရတာအားတော့နာပါတယ်။
ဦးကြည်စိုးမှားတဲ့ အမှားမျိုးကို အခြားဆရာဝန်ကြီးတွေ မပြောနဲ့ သာမန် Qualified GP တောင်မမှားသင့်ဘူး ဆိုတာ
အခိုင်အမာကို ပြောရဲပါတယ်ဗျာ။ ဦးကြည်စိုးကို ပင့်မြှောက်ပြီး ကာကွယ်ချင်ဇောနဲ့ အခြားဆရာဝန်ကြီးတွေ ဆရာဝန်
လေးတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး မစော်ကားပါနဲ့ ၊ မမိုက်ရိုင်းပါနဲ့၊ Please။
လူနာကစစ်ဆေးလာပြီးသားမို့လို့ ထပ်မစစ်ဆေးတော့ဘူး ဟုတ်လားခင်ဗျ? ဟားဟားဟားဟားလို့ ဦးနှောက်
ကောင်းသူ ဉာဏ် ရှိသူတွေက ဟားတိုက် ရယ် ကြမှာမြင်ယောင်မိတယ်။ အဲလိုသာဆို အဲဒီ point တစ်ချက်တည်း
နဲ့တင် ဦးကြည်စိုး နဲ့ SSC တို့ရဲ့ အသုံးမကျမှု က သက်သေပြပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ SSC လို ဆေးရုံ မျိုးလားဗျာ
အောင်ရတနာက စစ်ဆေးပြီးသားမို့ ထပ်မစစ် ဆေးတော့ဘူး ဆိုတာ။ ဒီစကားကို SSC မွေးခန်း အဝမှာရပ်ပြီး
ခုမှမွေးလာတဲ့ အနှီးထုပ် ကလေးရှေ့မှာ သွားပြောရင်တောင် ပြောတဲ့ ပါးစပ်ကလေးကို ဟိုလူမမည် လေးက
ရေသွန် ပူဇော်လိုက်လိမ့်ဦးမယ်။ အောင်ရတနာက မအူမလည်ဆရာဝန် တွေ ရဲ့ စစ်ချက်ကို SSC က rely လုပ်တယ်
ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ အောင်ရတနာနဲ့ SSC က ဝမ်းတူးရိုက်ပြီးချက်တာများလားဗျာ။ လူနာရဲ့ အဖွားက ဘဲ ဦးကြည်စိုး
နဲ့ခွဲမယ်ပြောပြော ၊ လူနာရဲ့ အဘိုးကဘဲ ကိုတော်ကြီး နဲ့ခွဲမယ်ပြောပြောလေ။ ခွဲသင့်မခွဲသင့် ၊ viable ဟုတ်မဟုတ်
ဆုံးဖြတ်ရမှာက ၊ ခွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ က ဦးကြည်စိုးလေဗျာ။ လူနာရဲ့ အဖွားမှ မဟုတ်တာခင်ဗျ။ တစ်ချို့ လူနာရှင်
ဆိုတာ တော့ ဒီလိုဘဲလေ ၊ ခွဲရမှာကို မခွဲနဲ့လို့ ပြောချင်ပြောမယ် ၊ မခွဲရမှာကို ခွဲလို့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့။ သူတို့က
ဆေးပညာရှင် မှမဟုတ်ကြတာဘဲနော်။ ဟုတ်ပြီ ဦးကြည်စိုးက ECG ရိုက်ခိုင်းပြီး ကောင်းရင်ခွဲမယ် ဆိုတော့ ခုဟာက
ECG ကောင်းတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးခွဲလိုက်တာပေါ့နော်။ လူနာက ဦးကြည်စိုး ဆီရောက်လာ တော့ သေကို သေတော့
မယ့် အခြေအနေဆို? သေကိုသေတော့မယ့် အခြေအနေ ရှိနေတဲ့ လူနာရဲ့ ECG က ကောင်းတယ်တဲ့လားဗျာ။ ECG
မရိုက်ပါနဲ့။ BP ဘဲ တိုင်းကြည့်လိုက်ပါဦး။ သေခါနီး လူနာဟုတ်လားမဟုတ်လား သိနိုင်တယ်ဗျ။ အဖြူရောင် ဆေး-၂
ကလည်း အင်တာနက်ပေါ်အထိ တက် နောက်နေသလိုဘဲဗျာ။ ရှင်းရှင်းလေးပါဗျာ။ စစ်ဆေးကြည့် severe Dengue
မှန်းသိတယ် ဆိုရင် ၊ ခွဲလည်း မရတော့ဘူး ဆိုတာသိရင် လူနာရှင်ကို ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ ၊ Sorry မရတော့ဘူးလို့။
Even ultrasound ရဲ့ result က Appendicitis ပြနေ တယ်ပဲထား။ သေတော့မယ့် လူနာကို ခွဲရင်လည်း မရနိုင်တော့
ဘူး ဆိုတာတော့ ပြောရမှာပေါ့ဗျ။ ပြောလို့မှ ခွဲပါဗျာ ကံတရားပေါ့ လို့ လူနာရှင်က အားကိုးတစ်ကြီး ပြောလာခဲ့မှ
သေမင်းနဲ့ စစ်ခင်းပေါ့ဗျ။ အမှန်ကတော့ SSC ရော ဦးကြည်စိုး ရော Dengue မှန်းကို မသိကြတာဗျ။ DSS မှန်းကိုမ
သိကြတာဗျ။ သူတို့သိတာ တစ်ခုပဲ ၊ ခွဲမယ် စိတ်မယ် ပါးပါးလည်း လှီးမယ် ၊ အတုံးလိုက်လည်း ခုတ်မယ် ဆိုတာလေ။
ကဲ ဘယ်သူ့အမှားလဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူတွေ တွေးပါလိမ့်မယ်။
ဦးကြည်စိုးက တရုတ်ပြည်ကို သွားဖို့ well planned လုပ်ထားပြီးသားဆိုရင် လူနာကို ဘာလို့များတာဝန်ယူ ခွဲစိတ်
ခဲ့သေးလဲ? ဘာလို့များ SSC မှာ sign on လုပ်ထားဆဲလဲ? ခွဲပြီးရင် visit မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင် ဘာလို့ ခွဲခဲ့သေးလဲ?
ဪ သိပြီ ၊ လူနာရှင်က အတင်းအကြပ်ခွဲခိုင်းလို့ အားနာပါးနာနဲ့ ခွဲပေးလိုက်တာ။ အဲလိုဟုတ်လား? တာဝန်ယူ ခွဲစိတ်
ပြီ ဆိုမှတော့ တရုတ်ပြည်သွားတာ ၊ ကုလားပြည် သွားတာ postpone လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ postpone မလုပ်နိုင်ရင် တာဝန်
မယူနဲ့ပေါ့။ လူနာက ခွဲခန်းက ထွက်လာတော့ ကောင်းတယ်တဲ့လားဗျ။ ခုနပြောတော့ သေခါနီးလူနာဆို ? ကိုတော်ကြီး
ခွဲလိုက်တာ Dengue ပါတစ်ခါတည်း ပျောက်သွားတယ်လား။ ဪ ဪ ဟိုလိုပြောလိုက် ဒီလိုဆိုလိုက်နဲ့၊ ဘယ်ဟာ
သေမယ့် လူနာကို ဦးကြည်စိုးက ခွဲမိသွားတယ်ထား၊ သေမယ့် လူနာ မှန်းတော့ ဦးကြည်စိုး ရော SSC ရော မသိခဲ့ဘူး
မလား? အဲဒါပဲလေ မတော်တရော ပြစ်ချက်က။ မှန်တယ် မဟာဇီဝက ကြီးတောင် ကုရင်း သေတဲ့လူနာရှိချင်ရှိခဲ့မှာပဲ။
သမားပဲဗျာ ဘုရားမှ မဟုတ်တာကို။ အဲဒီ လူနာကောင်မလေးက ဦးကြည်စိုး ခွဲလိုက်လို့ကောင်းသွားတာဆို? ဘာလို့
များ ကုရင်းသေတဲ့လူနာ ရှိချင်ရှိမှာပဲ ဆိုတဲ့ excuse လာပေးနေရတာလဲဗျ။ “မမှားသောရှေ့နေ မသေသောဆေးသမား”
စကားပုံကလည်း အမှန်ပါဘဲ ။ အဲဒီစကားပုံ ရဲ့ ခံစားခွင့်ကို ရှင်းပြသူ အဖြူရောင် ဆေး-၂ က လိုချင်နေတယ်ဆိုကတည်း
က ဦးကြည်စိုးကြောင့်လူနာသေတာ လို့ ဝန်ခံနေသလို ဖြစ်နေပြန်ပြီလေ။ ဘယ်ဘက်ကမှ မလွတ်ဘူး တွေ့လား? သေ
ရမယ်လို့ ရှိပြီးသားလူတစ်ယောက်က သေမင်းလက်က ပြေးမလွတ်ပါဘူး ဆိုတာကိုအဖြူရောင်သိတာလေ။ SSC နဲ့
ဦးကြည်စိုး တို့ကနားမလည်လို့ ခွဲလိုက်တာလို့ ဆိုလိုတာလားဗျ? ဦးကြည်စိုးတို့အုပ်စု က ဓားခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုတာ
မဟုတ်ဘူးဗျ။ လက်ကသူ့ဟာသူ ရှိနေတာကို အကြင်နာမဲ့စွာဓားနဲ့ဝင်ခုတ်တာ။ကိုယ်ကုပေးနေတဲ့ လူနာ တိမ်းပါးသွား
ရင် စိတ်မကောင်းဖြစ် ဝမ်းနည်းတတ်ကြတာ အလုပ်သင် ဆရာဝန် ၊ ဆရာဝန် ပေါက်စလေးတွေ နဲ့ အချို့ဆရာဝန်ကြီး
တွေ ပါဗျာ။ ဦးကြည်စိုးလို ဆရာဝန်မျိုးက တော့ တရုတ်ပြည်တောင်သွားပြီး ခေါင်းရှောင်နေနိုင်တယ်လေ။ ဟိုးလေးတစ်
ကျော်ဖြစ်တော့မှသာ ပြာပြာသလဲဖြစ်သွားကြတာ ။ မဟုတ်လို့ကတော့ မေ့နေကြတာလေ။ အမှန်ကတော့ ဗျာ ဘော်ချက်
ပြီး ခွဲလိုက်တယ် ၊ ၁၁ သိန်းစားပစ်လိုက်တယ် ၊ မြေကြီးဖုံးသွားမှာပဲ ဆိုပြီး လူနာရှင်မိသားစုကို အေးအေးလူလူလေး
လိမ်နေခဲ့ကြတာ။ လိမ်စားမှန်း လူနာရှင်က သိသွား တော့မှ လူနာအိမ်ကို SSC က တစ်ယောက်ကသွားပြီး ဦးကြည်စိုးနဲ့
SSC မှားမိကြောင်း တောင်းပန်ခဲ့တာ။
ဆေးရုံစရိတ် ၁၁ သိန်း မကဘူး ၊ သိန်း ၁၁၀ လည်းယူပါ ၊ ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံ ယူသလောက်ကို တန်အောင်
service ပေးပါ။ လိမ်ကောက်ပြီး မတရား မစားကြပါနဲ့။ ဆေးရုံ အကောင်းစားကြီး ၊ facilities အပျံစား ကြီးတွေပေးလို့
နင်းကန်ပိုက်ဆံ ယူတာပါ ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးမချိုးကြပါနဲ့။ ယုံကြည်မှု နဲ့ ကျန်းမာရေးလုံခြုံ မှုကိုပေးနိုင်လို့ ကုန်ကျစရိတ်
များတာပါဆို လက်ခံဖွယ်ရာပါ။ Weekly Eleven ဂျာနယ်က ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ တော့ အဖြူ
ရောင်ပြောလို့သိရတာပါ။ အဖြူရောင်ပြောသလို ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ် ၊ မဟုတ်ချင်လည်း မဟုတ်ပါ။ အခု မြင်တာက
တော့ အဖြူရောင် က Weekly Eleven ဂျာနယ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် ကို ပက်ပက်စက်စက်ကို အပုပ်ချ စော်ကား
နေတာကိုပါ။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် က အဖြူရောင်ရဲ့အပြောအရ လူယုတ်မာကြီး ဖြစ်တယ်ထား၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း
အောင် ကြောင့် လူနာ မိန်းကလေးသေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင်ကို နိုင်ငံတော်က အရေးယူခဲ့တာ
မရှိပါဘူး။ အဖြူရောင်ရဲ့အပြောအရ ဆို SSC နဲ့ အာရှတော်ဝင်တို့ဟာ service ပေးတာချင်းပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲ ၊ ဝင်ငွေ
ကောင်းတာချင်း ပြိုင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က private ဆေးရုံ ကြီးတွေရဲ့ အဓိက ပြဿနာက အဲဒါပါဘဲလေ။
အောက်တန်းစားဆန်လွန်းစွာ စီးပွါးရှာနေတာ အော့နှလုံးနာ စရာပါဗျာ။
ဦးကြည်စိုး ရဲ့ နာမည်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်တာတွေ ၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် ကို အဖြူရောင်က အခုလိုအပုပ်ချ
နှိပ်ကွပ် နေလို့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင်ရဲ့ နာမည်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်တာတွေထက် ပိုပြီး ထိခိုက်စရာက သေသွား
ရှာတဲ့ လူနာလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုပါ။ ဦးကြည်စိုး ရဲ့ နာမည်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်တာလောက်ကို စာဖွဲ့မနေပါ
နဲ့ဗျာ။ ဦးကြည်စိုး မှာအပြစ်ရှိလို့လဲ နိုင်ငံတော်က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာပါ။ ဦးကြည်စိုး နဲ့ SSC က ဘဲ မတော်တရော
လုပ်မှာပါ။ နိုင်ငံတော်က တော့ မတော်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဦးကြည်စိုးက အေးအေးဆေးဆေးဂေါက်ရိုက် ကျင်းစိမ် အနားယူပြီး ကမ္ဘာပတ်နေနိုင် သည့်အထိ ချမ်းသာချင် ချမ်းသာမှာ
ပေါ့ဗျာ။ သူ့သမီးသေတာမှ မဟုတ်တာလေ။ သေသူရဲ့ ဖခင် မိခင် ဘက်ကကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါလား? မစားမဖြစ်စားရတဲ့
ထမင်းတစ်လုပ် တောင် အေးအေးဆေးဆေး မျိုကျကြရဲ့လားလို့။ ဦးကြည်စိုးက SSC လို ဆေးရုံ မျိုးတွေမှာ လုပ်ခဲ့လို့
ချမ်းသာတာ ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ free ဆေးရုံ တွေမှာသာ ဝန်ထမ်းခဲ့ရင် အခုလို ချမ်းသာနေမယ်လို့ ထင်လို့လားဗျ။ဒေါက်တာ
သန်းထွန်းအောင် က သူများကို ပုတ်ခပ်ပြီးမှ စားရသောက်ရတဲ့ လူမျိုးဆိုရင် ဦးကြည်စိုးဟာ သူတစ်ပါးကို လိမ်လည်လှည့်ဖြား
အသက်သတ်ပြီးမှ စားရသောက်ရ ရှာတဲ့ လူမျိုးလို့သာသတ်မှတ်ရမှာပါ။ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းအောင် သူများကို ပုတ်ခပ်တာ
မထင်ရှားပေမဲ့ ဦးကြည်စိုး လိမ်လည်တာ ၊ အရည်အချင်း မဲ့တာ ၊ လူသတ်တာ ကို နိုင်ငံတော်ကတောင် အသိအမှတ်ပြုပြီးသားပါ။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် စီးပွါးရှာရာမှာ ဘယ်လိုအောက်တန်းကျတာတွေ ၊ ညစ်ပတ်တာတွေ ဟာ လူနာသေဆုံးရမှုနဲ့
ဘယ်လိုမှမပတ်သတ်လို့ သိပ်စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားသွားတာက အဖြူရောင်ပြောတဲ့ Rule (Oak) of Geneva
ဆိုတာကိုပါ။ Oath (ကတိသစ္စာ) ကို Oak (ဝက်သစ်ချပင်) လို့ မှားပြီးရေးကတည်းကို က အဖြူရောင်ရဲ့ ပညာ အဆင့်အတန်း
ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ အဖြူရောင် လို အရည်အချင်းမရှိသူတွေဟာ တိုင်းပြည် ရဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ
အဖြစ်ရှိနေတာဟာ တိုင်းပြည် အတော်ကိုနစ်နာလှပါတယ်။ အဖြူရောင်ဟာဆေးပညာ တစ်ကယ် တတ်ကျွမ်းသလား တော့
သံသယဝင်စရာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆို ဆေးပညာရှင်တွေ ရဲ့ ခံဝန်ကတိကို တောင် အင်္ဂလိပ် လို မှန်အောင် မပေါင်းတတ်လို့ပါ။
ဦးကြည်စိုးလို လူစားမျိုးကို ကြည်ညို ကိုးကွယ်သူ ဆိုတော့ ဒီလောက်ပဲလာမှာပါဘဲလေ။ ရှေ့လျှောက် အဖြူရောင်လို မတောက်
တခေါက် ယောင်ဝါးလေးတွေနဲ့တိုင်းပြည် အနာဂတ်တော့ စိုးရိမ်စရာပါဘဲ ။
ဦးကြည်စိုးလို ပညာ ၊ အရည်အချင်းလောက်နဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ဝင်ငွေဘယ်လောက်များရှာနိုင်မှာမို့လို့လဲခင်ဗျာ။ ဦးကြည်စိုးလို
လူတွေဟာ US နဲ့ EUROPE မှာထက်ကို မြန်မာပြည် မှာ ပိုပြီးဝင်ငွေ ကောင်းတာ အဖြူရောင်မသိတာလား ၊ တမင်တကာ
ဦးကြည်စိုး ကို မြှောက်ပင့်ပြီး လူအထင်ကြီးအောင်လျှောက်ပြောနေတာလားနိုင်ငံရပ်ခြားတွေ က မြန်မာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေ
ရဲ့ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ကို သိသူတိုင်းက ကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးကြည်စိုးလို SSC လို အချိုးမျိုးနဲ့ US EUROPE
မှာသာသွားချိုးရင် ဦးကြည်စိုး တစ်သက်မပြောနဲ့ ဆယ်သက်ရှာ တဲ့ ချမ်းသာမှု တောင် အလျော်ပေးလို့ လောက်မှာမဟုတ်ပါ
ဘူးခင်ဗျား။ သူ့အတွက် နိုင်ငံခြားဟာ ချောင်မှာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်လို သည်းခံနိုင်စွမ်းလွန်ကဲ တဲ့ လူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာက
သာလျှင်ဟန်ကျလွန်းလို့ လုပ်စားနေတာ ဦးကြည်စိုး တိုင်းပြည် ကို စေတနာထားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ စေတနာ
ထားနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်က မဟတ်က information တွေကို ပြည်သူ ကို ပေးဖို့ blog မှာ ရေးတဲ့ အဖြူရောင်ရဲ့
အောက်တန်းကျလှတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာ အလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖြူရောင်သတိမပြုမိတာက
ဆေးလောက ကမဟုတ်တဲ့ ပြည်သူတွေထဲမှာ အဖြူရောင်လိုအရည်အချင်းမဲ့ စိတ်ဓာတ် စုတ်ပြတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်တဲ့
အောက်တန်းစား ထက်ပိုပြီး ပညာတတ်တဲ့ ၊ အမှန်တရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေ အပုံကြီးရှိနေတယ် ဆိုတာကိုပါ။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် ကိုတိုက်ခိုက်ချင်ဇောနဲ့ မြန်မာ journalist တွေရဲ့ 98% ကို ဆဲဆိုစော်ကားပြီးရေးရဲတဲ့ သတ္တိ ၊
အခြားဆရာဝန်ကြီးတွေကို စော်ကားထိပါးရေးရဲ တဲ့ အဖြူရောင်ရဲ့ သတ္တိ တွေဟာ ဝမ်းတွင်းပါတော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။
ဦးကြည်စိုးလို လူစားမျိုးတွေရဲ့ သင်ကြားပဲ့ပြင် ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးကြည်စိုးလို ၊ SSC ဝန်ထမ်း
အချို့လို ၊ အဖြူရောင်လို ဆေးလောကရဲ့ အမည်းစက်တွေကြောင့်ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ဟာ ဆေးလောကသား တစ်ယောက်
လို့ဝန်ခံ ရမှာကိုတောင် ရှက်ရွံ့ နေမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးကြည်စိုးလို ၊ SSC ဝန်ထမ်း အချို့လို ၊ အဖြူရောင်လို ပြည်သူလူထုကို
လိမ်လည်လှည့်ဖြား ဒုက္ခပေးနေသူလူစားတွေ အတွက် ကျွန်တော့် လို ဆေးလောက သားတွေလည်း ပြည်သူလူထုဘက်က
တံတိုင်းကြီးတစ်ခုလို မားမားမတ်မတ်ရှိနေမယ် ဆိုတာမှတ်ထား လိုက်ပါခင်ဗျား။
I am agree with Yodelling. A forward mail with an article by A Phyu Yaung is spreading among Myanmar Internet Community. Her point of view isabit extreme and unrelevant.
အဖြူရောင်ဆေး (၂) မွှေသွားတာတော်တော် ဆိုးတယ်... ဒီအတွက် Eleven ကပြန်ပြောတယ်.. သူပြောတာတော်တော်ကျယ်ပြန့်သွားတယ်.. ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး
SSC က လူနာမိသားစုကို ကျေနပ်အောင် လာရောက်တောင်းပန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျေနပ်တယ်ဆိုတာ သိန်း ၁၀၀၀ ပေးလို့ ကျေနပ်တာကိုပြောတာလား။ ပြောတော့အမှန်တရားကိုလိုချင်လို့ ဂျာနယ်ထဲထည့်တာဆို။ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း နေမကောင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်။
လျော်ချင်းလျော် ဆရာဝန်က လျော်တယ်ဆိုရင် ကြားလို့ကောင်းသေးတယ်။ အခုဒီကိစ္စမှာ ဆေးခန်းက လျော်တယ်ဆိုတော့ ရိုးကော ရိုးသားကြရဲ့လား? ဆေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ငွေကြေးကိစ္စမပါဘူး။
ဆရာကြီးဦးကြည်စိုးလည်း သိန်း၅၀၀ လျှော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပဲ။
ဲပြသနာဖြစ်လာပြီဆိုတော့လည်း နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ကြေရာကြေကြောင်း လုပ်ကြရတာပေါ့။
ှဃ ကလည်း ၁၀၀၀ တဲ.။
ဒီသတင်းတွေကတော့ Myanmar Journal တွေမှာမပါတော့ဘူးလေ။
Under table ကလည်း Myanmar မှာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဖြစ်ပြီးကတည်းက ဆေးလောကမှာတော့ TENSION တခုတော့ရှိသွားပြီ။
အရင်တုံးကတော့ အပြင်မှာဆရာဝန်ကြီးတွေက လူနာရဲ့စရိတ်စက သက်သာအောင် စေတနာနဲ့ investigations (ဆေးစစ်ချက်)တွေကို clinical signs ပေါ်မူတည်ပြီး အတော်ကြီးကိုလိုအပ်မှ လုပ်ဘို့စဉ်းစားပြီး run ကြတယ်တဲ့။
အခုတော့သေချာအောင် လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင် လူနာတွေအတွက်တော့ကုန်ကျစရိတ်ပိုများမယ်။ ပိုပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ပေါ့လေ။
ရဟန်း သံဃာ တို့နဲ့ပတ်သက်ရင် အရန်းမရေးသင့်
မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကိုပြောဘူးသည်။ တခြားဘာသာတွေမှာဆို တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တော့ ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးဌာနတွေကိုသွားကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မကြာခဏရောက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်းတစ်ပတ်တစ်ခါတော့ သွားကြပါလားတိုတော့။
သူတို့အိမ်ကလူကြီးတွေကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာတော်ကို မိန်းမနဲ့ပက်ပင်းမြင်ပြီးကထဲက ဘုန်းကြီးတွေကိုကြည်ညိုလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်။
ဘုန်းကြီး နဲ့ လူနဲ့ မြေမှု ၊ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုစသဖြင့် မကြာခဏ ရှင်းရှင်းပေးနေရတော့ ဘုန်းကြီးတွေကို လူလိုဘဲမြင်နေတယ်။ ကြည်ညိုဖို့ရာခက်နေတယ် ဆိုပါတယ်။
လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့အောက်ဖေါ်ပြပါစာအုပ်မှာတော့ အန္ဓပုထုဇဉ် ရဟန်းရယ်လို့ ရှိကြောင်း ဖတ်ရပါတယ်။
တကယ်တော့ (မြို့အပြင်လဲရောက် ရဟန်းအသွင်လည်းပြောက်ဆိုတဲ့) ပုံပြင်ထဲကလို အ၀ါရေဆင်မြန်းသူ မှန်သမျှကို သံဃာရည်မှန်းလို့ ကြည်ညိုရမှာ၊ ကိုးကွယ်ရမှာ
"ကျွန်တော် က ၀သနာပါလို့ ဆေးတက္ကသိုလ်တက် ပီးဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဆေး ကျောင်းသားဘ၀တစ်လျောက်လုံး ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာ။ ဒါ ပေမယ့်ဆရာဝန်လုပ်ပြီးခြောက်လ အကြာမှာ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ ဒီ Professionalကို စွန့်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် လူငယ်ဘ၀မှာ အားကျတဲ့သူတွေကအာဖရိကတောနက်ကြီး ထဲမှာအနာကြီးရောဂါသည်လူနာ တွေအတွက် ဘ၀တစ်ခုလုံး မြှုပ်နှံ သွားတဲ့ ဒေါက်တာ အဲဖရက် ရွိုက်ဇာ၊ ဖိလစ်ပိုင်သူရဲကောင်း ဒေါက်တာရီဇော်၊ ယုံကြည်ချက်နဲ့ 'ချေ '၊ နော်မန်ဗတ်သွန်း၊ သူတို့တွေ နဲ့ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။
AJ CRONIN ရဲ့ Citadel (ရဲတိုက်)၀တ္ထုထဲက ဒေါက်တာအင် ဒရူးမေဆန်၊ ဒေါက်တာရီဇော်၊ နော် မန်ဗတ်သွန်းတို့ရဲ့ စကားလုံးတွေကို တဖွဖွဆိုရင်း ဆိုရင်း ကျွန်တော်ဖြစ် ချင်ခဲ့တဲ့ ဆေးလောကကို စိတ်ကူး ယဉ်ခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်တော်ဆရာဝန် ဖြစ်ခါစ ၁၉၈၇-၈၈ လောက်က တည်းက ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးစပြု လာတဲ့ ဆေးလောက"
Quotation 1 from သန်းထွဋ်အောင် ၂၀၁၀ တော့ရောက်ပြီ . . .
ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မြတ်မှု အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ (Moral Responsibility)ရှိပါတယ်။ နင်ငံ
ရေးဦးဆောင်သူတွေ၊ ဂျာနယ်လစ် တွေ၊ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေ၊ ရှေ့နေတရားသူကြီးတွေဟာ ဒီတာဝန်ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အောင် မြင်မှုတွေကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုး (Moral Value)နဲ့ဆုံးဖြတ်ခံကြတဲ့လူတွေ ပါ။ သူတို့ရဲ့(Moral Value) မင့်တက်မှသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာမြင့် တက်လာမှာ။ ဘယ်သူတရားပျက် ပျက်၊ ကိုယ်မပျက်ဖို့စနစ်တွေ၊ ခေတ် တွေ၊ အခြေအနေတွေကို လက်ညှိုး မထိုးဘဲ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကို မှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်။
Quotation2from သန်းထွဋ်အောင် ၂၀၁၀ တော့ရောက်ပြီ . . .
1(ကျွန်တော် က ၀သနာပါလို့ ဆေးတက္ကသိုလ်တက် ပီးဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဆေး ကျောင်းသားဘ၀တစ်လျောက်လုံး ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာ။)(ဆရာဝန် ဖစ်ခါစ ၁၉၈၇-၈၈ လောက်က တည်းက ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးစပြု လာတဲ့ ဆေးလောက)စနစ်တွေ၊ ခေတ် တွေ၊ အခြေအနေတွေကို လက်ညှိုး မထိုးဘဲ
2(ဒီ Professionalကို စွန့်ခဲ့ရ)ဒီတာဝန်ရှိပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကို မှင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်
3(ဂျာနယ်တွေ လို့ လူထုအမြင်မှားခဲ့ရတဲ့ဘ၀ကနေ လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစားလာခဲ့ရ တာပါ။ သတင်းမှန်တွေကို တင်ပြ နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် လူထုသာမက အစိုးရပါ စတုတမဏ္ဍိုင်အဖြစ်အသိ အမှတ်ပြုခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ အတွက် ဒီလေးနှစ်တာကာလ အတွင်း ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုတွေဟာခါးသီးလှပါတယ်)2010-1987 ကျွန်တော်ဆရာဝန် ဖြစ်ခါစ=23 Years
OOPS, YOU R MY IDOL,MR THAN HTUT AUNG!!!!!!!!!!!!!!!!1
Moral Value ဆိုတာကိုယ်ကျင့်တရားကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဆရာတော်အရှင်ဥာဏိဿရ၏ တရားတော်တွေထဲမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို များစွာ အလေးအနက်ထားဟောကြောင်းပါ။
ဆိတ်ကွယ်ရာမှာပင်လျှင် မကောင်းမှုကို မပြုခြင်းဖြင့် မြတ်စွာဘုရား သည် ကောင်းစွာရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ယနေ့ခေတ် ကျွန်တော်တို့၏ပြဿနာမှာ မကောင်းတာဆိုတာဘာတွေလဲ၊ ကောင်းတာတွေကကောဘာတွေလည်း ဆိုတဲ့ အဆုံးအဖြတ်တွေပါ။
ငါပြောတာမှကောင်းတာတွေ။ သူများပြောတာတွေကတော့ မကောင်းတာတွေလို့ မပြောသင့်ဘူးမဟုတ်လား။
Posted on December 25, 2009 by ကြယ်စင်
(၂) ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်သူမြတ်များ
(၃) ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ်များ
(၇) ဆွေမျိုးထဲက ရိုသေထိုက်သူများ
(၈) လောကီ ၊ လောကုတ္တရာ ဆရာများ
(၉) ကြီးပွားရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသူများ
(၁၀) မိမိအား တရားဓမ္မသောပြပေးသူများ ။
သြော် မကောင်းလေစွ၊ မကောင်းလေစွ၊ မကောင်းလေစွ။
အပေါ်ကကွန်မင့် ရယ် အောက်ပါ လင့် http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5525&Itemid=1
က မိုးမခ စာမျက်နှာရယ်ကြောင့် ပြောချင်တာလေးနည်းနည်း ရှိ လာပါတယ်။
အိုင်ဆေး၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်??? … နောင်ကြီးတို့ရယ် နဝတ နအဖ ခေတ် ဂျာနယ်တွေက ဘယ်လို တာဝန်တွေ ယူခဲ့ဘူးလို့ ဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးလို့ ပါလိမ့်ဗျာ အင်းပေါ့လေ စစ်တပ်ကတောင် တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ ဆိုပြီး Hermaphrodite ကြီးဖြစ်နေတဲ့ အရပ်မှာတော့ နောင်ကြီးတို့ က စာမျက်နှာတွေ ကို အစိုးရပါတယ်ဗျာ … သဘောရှိ သဘောရှိ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဆိုတော့ လည်း စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ပေါ့။
သဘောရှိ သဘောရှိ ဆိုလို့ ပြောရရင် နည်းနည်း ဟော့ရှော့ဖြစ်တာလေးတွေ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ အာဘော် နဲ့ နည်းနည်း ဆန့်ကျင်ပြီး အမှန်တရား နဲ့ နည်းနည်း နီးစပ်တာလေးတွေ သဘောရှိ ထုတ်ဝေခွင့် ရဖို့ကို ဆယ့်တစ်အုပ်စုကဆရာတွေ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ သုံးကြရတယ် ဆိုတာလည်း သာဂိတို့က သိနေတယ်နော် … ကြည့်ရတာ နောင်ကြီးတို့က ပူစီကက် ဆိုရင်ကြွက်ခုတ်ဖို့သာ အဓိက ပူစီကက် က အဖြူရောင်ဖြစ်တာ အမည်းရောင် ဖြစ်တာ အရေးမကြီး ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေ ပြီထင်ပါ့ဗျာ … အဲဒီလို ဆိုရင်တော့ ဆယ့်တစ်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ ကျင့်ဝတ် သမား (Idealist) ရဲ့စံ တွေနဲ့ “ဝေးပြီ ဘေဘီ” နော်။
ဆယ့်တစ်ပိုင်ရှင်ကြီးက ဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီး စိတ်ကူးတွေယဉ်တတ် တဲ့ သူမျိုး ဆိုတာကိုးဗျ … ဆေးကုတဲ့ ဆရာဝန် ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သမားတွေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ အလုပ် မဟုတ်လေတော့ ဆေးကု မစားတာပဲကောင်းပါတယ်။ ထွဋ်ထွဋ် က ပထမ ၁၁ ဂျာနယ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပရိတ်သတ် အများဆုံး ရှိတဲ့ အသင်းကို ပစ်ပင့်ပေးခဲ့တယ်လေ။ ကောင်းပါတယ် ချီးမွမ်းသင့်တဲ့ မဟာဗျူဟာပါဘဲဗျာ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာဘောလုံးအသင်း ကိုဇောင်းပေးတဲ့ ဂျာနယ်အောင်မြင်တာပေါ့။ မြန်မာ့ဘောလုံး တိုးတက်ရေးဆိုပြီး ဘောလုံးအသင်းတောင် ထောင်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ သို့ပေမယ်လို့ နည်းနည်းကလေးလည်း ညစ်ခံ ရရော စိတ်ကူးယဉ် သမားပီပီ စိတ်ကောက်ပြီး အသင်းပါ ဖျက် ပစ်လိုက်ရော မဟုတ်လား။ ဒီလို ရင့်ကျက်မှုမျိုးနဲ့တော့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်??? ရင့်ကျက်မှုကထားပါတော့ အရည်အချင်းပိုင်းကြတော့ကော ??? နောင်တော်တို့ရဲ့ တစ်ဆယ့်တစ်က ပဏ္ဍိတ်တွေကလည်း ဟဲဟဲ … ဆရာကြီးတွေကိုး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နယ်ပယ် တိုင်း မှာ အရည်အချင်း တွေ ကျကျလာတာ ကိုသိပါတယ် ဒီတော့ ပထမ ၁၁ ဂျာနယ်က ဆရာသမားတွေလည်း သိပ်တော်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး မှားတဲ့ အခါမှားပြီး မမှန်တဲ့ အခါလည်း မမှန် ဖြစ်မှာပေါ့ လေ သို့ပေမယ်လို့ … အင်း မှတ်မိသေးတယ် လေးငါးခြောက်နှစ်တော့ ရှိရောပေါ့ မန်ယူအသင်း ပျားတုပ်နေတဲ့ အချိန်လေ၊ ဖလက်ချာကလည်း ရုန်းကန်နေတုန်း၊ စီရော်နယ်ဒို (ရော်နယ်ဒိုတူး) က လည်းရောက်ခါစ၊ ဖော်လန်ကိုလည်း မရောင်း ရသေးဘူး ဟဲဟဲ ဖာဂူဆန် သင်းတို့ကို ဝယ်တာမှားတယ် ပေါ့၊ ဘောလုံးသမားတွေ ရဲ့ အရည်အချင်းကို မမြင်တတ်ဘူးပေါ့ မန်ယူ = “ချာ တူး လန်” အသင်းဆိုပြီးတော့ အလဲဗင်းမှာ ရေးခဲ့ကြတာပေါ့
ဇာတ်ပေါင်းသော် ချာဆိုတဲ့ ဖလက်ချာက နိုင်ငံ အသင်းမှာ ကပ္ပတိန် မန်ယူမှာ အားအထားဆုံးတွေ ထဲကတစ်ယောက်၊ တူး ဆိုတဲ့ စီရော်နယ်ဒိုက ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအကြီးဆုံး ကစားသမား၊ လန်ဆိုတဲ့ ဖော်လန်က စပိန်မှာ ရွှေဖိနပ်ဆုရ ဟဲဟဲ ဖါဂူဆန် သိပ်တော့ မှားပုံ မရပါဘူး။ အဲဒီလောက် ဒဲ့ကြီးလွဲတာကြတော့ … အဲဒါကို အလဲဗင်း မှာ ကွန်မင့်ရေးပါသေးတယ် ဟဲဟဲ မျှမျှတတ ပေါ့လေ Moral Value ပေါ့လေ Mr Righteous ကြီးတွေက ထည့်မပေးပါဘူး ဟဲဟဲ
အခုလည်း SSC သတင်းကို ဆရာတို့ဆီက ဆရာလေးက ထည့်တော့ Medical Ethic နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုင်ပင်ခံ ပေါ့လေ သွားမေးရှာပါတယ် ကိုယ်တိုင်ရော သားဖြစ်သူပါ မော်ဒယ်လေးတွေ နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ထဲထဲ ဝင်ဝင် ရှိလှတဲ့ အညာသား ပါမောက္ခ ဆရာဝန်ကြီးကို၊ သမားကျင့်ဝတ် ဆိုတာကို သင်းကို သွားမေးတာကတော့ ဟဲဟဲ နောက်နေသလို ပါပဲနော်။ အဲလို အဲလို ဆရာတို့ဆီက ဆရာလေးတွေ က အထူအပါးကို နားလည်ရှာတာ။ တခြားဟာသဖြစ်တာတွေ အများကြီးပါ ကြုံရင်ပြောပါဦးမယ်။ ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးမီဒီယာလို့ ကိုယ့်ကိုအထင်ရောက်နေ တဲ့ ဆရာသမားတွေ အကြောင်းနော်။ အင်တာဗျူးရင် မေးတဲ့ လူကလည်း မေးတဲ့ အကြောင်းအရာ ကို မေးတဲ့ ဘာသာရပ် ကို တီးမိခေါက်မိ ရှိနေရမယ်ဆို မဟုတ်လား။ လှည့်ပတ်တွေးရရင်တော့ ဆယ့်တစ်အုပ်စုက အများစုထက်တော့ သာရှာပါတယ် သင်းတို့ က စာလုံးပေါင်း သိပ်မမှားဘူး၊ သဒ္ဒါ နဲ့ အရေးအသား တခြားမြန်မာ မီဒီယာတွေ ထက် မသာတောင် မညံ့ရှာ ဘူး သို့ပေမယ့်လည်းပေါ့ လေ အင်း ကိုကိုမဏ္ဍိုင် ဦးဦးမဏ္ဍိုင် ကြီးတို့ ရယ် ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတဲ့ ပေါ်ပင် အဆင့်ကနေ တကယ် အရည်အချင်း ရှိတဲ့ မဏ္ဍိုင် အစစ်တွေဖြစ်လာ ကြစေချင်ပါတယ်။ အများပြည်သူ အားကိုးရာ တခုရစေချင်လွန်းလို့ပါ။ ထွဋ်ထွဋ် ရေ အခုတောင် ကိုးကွယ်မယ့် လူ က ကိုးကွယ်ဖို့ပြင်နေပြီ “YOU R MY IDOL” တွေဘာတွေဖြစ်နေပြီ။ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့လူကလည်း (နှစ်ထောင့်) တစ်ဆယ် မှာ ဆယ့်တစ် တို့ တက်ဖြစ်မယ် ထင်နေပြီ။ ဟီးဟီး လှေကတော့ ဟိုဘက်လူး ဒီဘက်လိမ့် ဖြစ်နေပြီ။
(ဝေဖန်တာကို စိတ်ကောက်ပြီး ဂျာနယ် ကိုပိတ် မပစ်ပါ စေနဲ့လို့တော့ ဆုတောင်းပါတယ် တခြားဂျာနယ်တွေက သတ်ပုံအကျ အပေါက် များလွန်းလို့ပါ။)
လူနာရှင်မိသားစုရဲ့ အလှူဒါနသတင်းများကို ဂျာနယ်များတွင် ဖတ်ရှုရသောကြောင့် သာဓုခေါ်မိပါသည်။
ဒီလောက် ဆရာခေါ်ခံချင်တဲ့ " ထွဋ်ထွဋ် " ကို သောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ခေါ်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ ဟဲဟဲ ဒီလို အခေါ်တတ်လို့လည်း ၂၄နာရီ အွန်လိုင်းနိုင်တဲ့ ရွှေညဏ်တော်စူးရောက်တဲ့ ပြည့်သူ့ ဘက်တော်သား
တငြိမ့်ငြိမ့် ကြည့်ပီး ကြည်နူး နေကြတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ဘယ်နေမတုန်း။ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ငါးစိမ်းသည် "ရင်ဘတ်ကြီး"နဲ့ ပစ်ပေါက်နေရော့ပေါ့။
လူဘဲဗျာ။ သူ့တစ်ယောက်ထဲကို အပြစ်မြင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးလှတို့ ဦးချစ်မောင်တို့ကိုတောင် မေ့သွားလောက်အောင် အပြောကြီးတာကျတော့ ယားကျိကျိ ဖြစ်လွန်းလို့ပါ။ ထောက်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကလည်း အပြောနောက် အလျင်မမှီရှာခဲ့တဲ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေပါ။
(ကျင့်ဝတ်ပိုင်းတင်မဟုတ် ဘဲ အမှန်တရားပေါ်မှာ """"""အဂတိ ကင်းကင်း"""""
သူများတွေကို ဝေဖန်ရုံ တင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လည်းစောင့်ထိန်းခဲ့ပါတယ်။)
၂၀၁၀ တော့ရောက်ပြီ . .by သန်းထွဋ်အောင်
နောက် ဦးဇော်ဇော်အကြောင်းစာပိုဒ်မှာ ၂၀၁၀ မှာ ထုတ်မယ့် အချိုရည်အသစ် အကြောင်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။**
ဟာ ဒါလေးများ ဘာဆန်းတုန်းပေါ့ နော့။ ဆန်းတယ်ဗျ အဲဒီဂျာနယ်မှာဘဲ နှစ်မျက်နှာ အပြည့် အချိုရည် ကြော်ငြာကြီး ဟီးလို့။
မလုပ်နဲ့ မပြောပါဘူးဗျာ။ သိပ်တော့ မပြောနဲ့ပေါ့။ လူငယ်တွေက သိပ်မအတော့ဘူး ဆိုတာတော့ သိထားကြပါ။ ယားကျိကျိဖြစ်အောင် သိပ်မလုပ်ကြပါနဲ့။
**အဲ ၀က်ဆိုဒ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မပါတော့ဘူးဗျ။ စာလုံးကျန်ခဲ့သလိုလိုလုပ်ထားပါလား ဟဟ။ ဂျာနယ်မှာတော့ ဟီးလို့ပါ။**
ဒီမှာ ဒီမှတ်ချက် နဲ့ link ကိုလာထားတာပါ။
၁. “လွဲမှားသောဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်” ခွဲစိတ်ကုသခံလူနာတဦး“ထပ်မ”ံသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း လို့ဆိုရအောင် ဒီလူနာကိုကုသမှုပေးရာမှာ၊ ဘယ်လိုအချိန်ဘယ်အဆင့်မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီး၊အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဘာကြောင့်လွဲမှားပါတယ်ဆိုတာ တလုံးတပါဒမှရေးထားတာမတွေ့ပါလား။ ဒီလောက်အရေးကြီးပြီးတဲ့မှတ်ချက်ကို ရန်ပိုင် က ဘာအထောက်အထားမှ မပါဘဲရေးတာကို ဧရာဝတီ(အယ်ဒီတာ)ကလဲ ဖေါ်ပြတာပဲ။ အတော့်ကို လေးစားလောက်တဲ့ မီဒီယာပါလား။
၂.“ဒီတင်ပါးဆုံးခွဲတဲ့ အသေးအမွှား”ပြဿနာကလေးကို လို့လူနာရှင်က မသိလို့ပြောသည့်တိုင် Master of something, Jack of everything ဖြစ်ရမယ့် သတင်းသမားတို့က တကယ်မသိလို့လား၊ သိသိကြီးနဲ့ ချွန်တွန်းလုပ်ချင်လို့လား။ စာဖတ်ပရိဿတ်ကို ဘာရှင်လင်းချက်မှမလုပ်ဒီအတိုင်းလွှတ်လိုက်တယ်။ တင်ပဆုံရိုးခွဲစိတ်မှု ဟာ “အသေးအမွှားခွဲစိတ်မှုကလေး” ဟုတ်မဟုတ်၊ဒီလိုအခြေအနေ(ဒီလိုရောဂါ)မှာဘယ်လိုကုသမှုမျိုးကိုပေးသင့်ပြီးသတင်းထဲကလူနာဟာအဲဒီကုသမှုမျိုးရ၊မရ။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ဘယ်လောက်နီးစပ်(သို့) ဘယ်မျှလွဲချော်၏။ ဒါမျိုးတွေမပါပါလား။
၃.ဒီတော့ ပေးချင်တဲ့မှတ်ချက်ကတော့ ဧရဝတီ ဟာအတင်းအဖျင်းရေးတဲ့ မီဒီယာအဆင့်ပဲ။ ငါးပွက်တုံးငါးစာချပြီး ဆရာဝန်တွေကိုနှိပ်ကွပ်လို့ရတုံးနှိပ်လိုက်မဟဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲ။
၄.ဒီမှတ်ချက်ကိုမဖေါ်ပြရဲလို့ဖျက်ချင်လဲဖျက်ပေါ့။လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ကိုလေးစားသူ ဧရာဝတီ ခင်ဗျား။ (နာမည်ကိုနှမျောလိုက်တာ။)
ဒီပို့စ်ကို တင်ခဲ့တာ ကြာပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ လာရောက် ဆွေးနွေးတင်ပြနေသေးတာကို တွေ့ရလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုရှိလာတာကို ၀မ်းသာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လာရေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေက ကျွန်မ တင်ထားတဲ့ မူလဆွေးနွေးချက်နဲ့ မသက်ဆိုင်လို့ ဘာမှ Reply ပြန်မလုပ်တာကိုလည်း နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါက်တာ ကျော်ဇင် အခုနောက်ဆုံး လာရေးထားတာတခုတော့ ကျွန်မ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ နည်းနည်း ပြန်ဆွေးနွေးပါရစေ။
ဒေါက်တာ ကျော်ဇင်မှတ်ချက်ကြောင့် ဧရာဝတီမှာ တင်ထားတဲ့ သတင်းကို ကျွန်မ သွားဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ”လွဲမှားသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဆိုတာနဲ့ ခွဲစိတ်မှု အကြီးအသေး” ဆိုတဲ့အချက်တွေအပေါ် ရာဝတီက အခြေအမြစ်မရှိ သက်သေအထောက်အထား မရှိ ပြောထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာက ဧရာဝတီကို စွပ်စွဲထားတဲ့ ”ဧရဝတီ ဟာအတင်းအဖျင်းရေးတဲ့ မီဒီယာအဆင့်ပဲ။ ငါးပွက်တုံးငါးစာချပြီး ဆရာဝန်တွေကို နှိပ်ကွပ်လို့ရတုံး နှိပ်လိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲ” ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ပြောရလောက်တဲ့ အထောက်အထားကို မတွေ့ရဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Procedure ကို နားမလည်လို့ သတင်းတင်ပြမှု အားနည်းချွတ်ချော်မှု တခုအဖြစ်ပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဆရာထောက်ပြတာတွေက အပြုသဘောဆန်တဲ့ လေသံနဲ့ ဖြစ်ရင် အားလုံး လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ ဧရာဝတီက အထောက်အထားမရှိပဲနဲ့ သတင်းကို ဒီလိုရေးလို့ ပညာရှင်တယောက် ဖြစ်တဲ့ ဆရာကလည်း အထောက်အထားမရှိပဲနဲ့ ဒီလိုလေသံနဲ့ ပြန်ပြီး စွပ်စွဲတာမျိုး ဖြစ်နေတော့ အပေါ်မှာ ထောက်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ကျစေပြီး အလဟသ ဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်မ မြင်ရတယ်။ လူတိုင်းမှာ Emotional ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်ဆိုတာ သာမာန် ပညာမဲ့သူနဲ့ မတူစေရဘဲ တခြားတဘက်သားက ဘယ်လိုပဲ ချွတ်ယွင်းနေပါစေ မိမိဘက်က အမြဲတမ်း Professional ဆန်ဆန် ပြုမူကျင့်ကြံ တုံ့ပြန်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ Professional behaviour ကို ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ ဒေါက်တာ ကျော်ဇင်ကို ကျွန်မ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပညာရှင်တယောက် မဟုတ်သေးပေမဲ့ ပညာရှင်တယောက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းကို သင်ကြားနေရသူ ဖြစ်လို့ အကြံပြုတာဖြစ်ပြီး အကြံပြုတဲ့အထဲမှာ အမှားပါရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
အို … အသင်လောက
လောက၌ ခပ်သိမ်းသော ကျေးငှက် တို့သည် လေ၌ မြူးထူးပျံဝဲ ကြကုန်၏
(သိပါတယ် သိပါတယ် သာဂိ သိပါတယ် ပင်ဂွင်းစသည်အားဖြင့် လေမှာ မပျံ တဲ့ကျေးငှက် သာရကာတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ သိပါတယ် သဘောပြောတာပါ။)
လောက၌ ခပ်သိမ်းသော ကျားသတ္တဝါ တို့သည် စင်းကျားသော အဆင်အသွေး ရှိကြကုန်၏
လောက၌ ခပ်သိမ်းသော သစ်သတ္တဝါ တို့သည် ပြောက်သော အဆင်အသွေး ရှိကြကုန်၏
လောက၌ ခပ်သိမ်းသော သူနာပြုတို့ သည် တသံတည်း ထွက်ကြကုန်၏
အထူးသဖြင့် သားပိုက်ကောင် / ကီဝီ အစ ရှိသော အရပ်မှ သူနာပြုကြီး၊ သူနာပြုလတ်၊ သူနာပြုငယ်၊ သူနာပြုလောင်း တို့ သည် အထူးသဖြင့် တသံတည်း ထွက်ကြကုန်၏။
ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါ အပေါင်း ချမ်းသာကြစေကုန်
ဆိုတာ အဲဒီသတင်းတခုလုံးရဲ့ အဓိကအကေ့ာင်းပဲ။ သတင်းတခုလုံးဟာဒါပဲ။ ကျန်တာတွေအားလုံးဟာဒီအချက်ကိုပဲဖွင့်ဆိုရှင်းပြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကလွဲလို့တခြားဘာမှမဟုတ်ဘူး။
မငယ်နိုင် ဒီအချက်ကိုအခြေအမြစ်မရှိ။ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမရှိရေးတယ်လို့ လက်ခံတယ်မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ မရွှန်းလဲ့ရည် သေဆုံးမှူနဲ့ ခုအကေ့ာင်းအရာကို “လူနာတဦးထပ်မံသေဆုံး”လို့သုံးနှုန်းပြီးဆွဲစပ်သွားတယ်။ဒါဟာလတ်တလောလူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုခုတုံးလုပ်ပြီးသူ့သတင်းကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ချင်တ၊ဲ့ငါးပွက်တုံးငါးစာချတဲ့၊သိမ်ဖျင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းနိုင်ပါသလား။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ အ့ကံပြုချက်(Professional ဆန်ဆန်တုံန့ပြန်သင့်ကြောင်း)ကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကတော့ အတင်းပြောသူတွေကိုဒီလိုပုံစံနဲပဲတုန့်ပြန်သင့်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။(သူတို့ကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကိုမဖေါ်ပြရဲသည့်တိုင်ကျွန်တော်တော့ကျေနပ်သွားတယ်ဗျာ)။
ဒေါက်တာကျော်ဇင် ပြောတာကို ကျွန်မ ငြင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြောပုံပြောနည်းက ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိပဲ အရာမရောက် ဖြစ်နေလို့ ပညာရှင်တယောက်ဆီက ထွက်လာတဲ့စကားဟာ သာမန်စာဖတ်သူတွေအတွက် အသုံးဝင်စေချင် မှတ်သားစရာ ဖြစ်စေချင်လို့သာ အကြံပြုတာ ဖြစ်တယ်။ ဧရာဝတီကို ကျွန်မမြင်တဲ့ အမြင်နဲ့ ဆရာမြင်တဲ့ အမြင်မတူတာလည်း အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက ဧရာဝတီဘက်က ရှေ့နေလိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဆရာရေးထားတဲ့ စာကို သတင်းသမားတွေကိုရော ဆရာဝန်တွေကိုဘာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ သဘောမထားတဲ့ သာမန်အမြင်ရှိ သူတယောက် အနေနဲ့ ဖတ်ရင် ဆရာအမှန်တွေ ရေးထားတယ်လို့ လက်ခံဖို့မရှိဘဲ အော်- ဒါတွေက သတင်းသမားတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေ အပြန်အလှန် ဒီလိုပဲ ထိုးနက်နေတာပဲလို့ပဲ မှတ်ယူလိမ့်မယ်။ သတင်းသမားကို အမြင်ကပ်နေသူတွေက ဆရာ့ကို ချီးကျူးလိမ့်မယ်၊ ဆရာဝန်တွေကို တဘက်သတ် မြင်နေတဲ့သူတွေက ဆရာ့ကို အမြင်ကပ်လိမ့်မယ်။ ဆရာ့မှတ်ချက်ထဲက မှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဆရာ့ပြောပုံဆိုပုံတွေကြောင့် ဒီလိုနဲ့ပဲ အရာမထင်ပဲ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ရလဒ်က သတင်းသမားကို ဒေါသဖြစ်နေဲ့ ဆရာ့ဒေါသကို ပေါက်ကွဲ ခွင့်ရတာတခုပဲ ရှိပြီး ဆရာ့အတွက်လည်း အကျိုးမရှိသလို တခြားဘယ်သူ့အတွက်မှလည်း အကျိူးမရှိဖြစ်သွားတယ်။ စကားဆိုတာ မှန်တိုင်းလည်း ပြောပုံမမှန်ရင် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ပညာရှင်ဆိုတာ မှန်လည်းမှန်ရမယ် အသုံးဝင်အောင်လည်း ပြောတတ်ဖို့လိုတာကို ကျွန်မ အကြံပြုတာ ဖြစ်တယ်။
လောကထဲကလူသားတွေအားလုံးဟာ ကိုယ်ပြောတာမှအမှန် ကိုယ်လုပ်တာမှအမှန် ကိုယ်တွေး
တာမှအမှန်လို့ ထင်နေကျတဲ့ သူတွေကများပါတယ်
ကိုယ်ရဲ့အမှားကို တစ်ပါးသူတွေကမြင်လို့ ပြောတဲ့
အခါမှာ မနှစ်သက်ကြတာကလည်း လူတိုင်းရဲ့အကျင့်
တစ်ခုပါ အားလုံးကျင့်သုံးရမှာက ဟုတ်တာလုပ် မှန်